Ama-FAQ • Ukuhlikihlizwa komzimba ne-NuRu Massage
Ukuthanjiswa komzimba nezimpendulo zikaNuru Massage
Singaba kanjani usizo?
I-Nuru massage iqala ukuthola ukuthandwa. Izimbongolo ezimbalwa ezedlule, iNew York City yayingazi ngisho nale ndlela emangalisayo. Siyajabula futhi siyaziqhenya ngokuba ngabokuqala ukunikezela ukubhucungwa kwezinga eliphakeme lezocansi eManhattan naseNYC. Asikwazi ukuhlehlisa ukwenza amaklayenti ethu abe nobudlelwano nale nqubo ethokozisayo. Kuma-salon ethu, sisebenzisa kuphela isihlengo semvelo sonke esenziwe ngezicucu zasolwandle ezimnyama nezisicaba zeNuru ukudala umuzwa oshelelayo ongakaze ube nawo ngaphambili. Kuyingxenye ebalulekile yalesi sithakazelo sezinkanuko zenyama.Funda kabanzi… Wethu omuhle obhucungayo ifudumeza i-gel bese iqala ukugcoba umzimba wakho wangaphakathi kusuka ekhanda kuye ozwaneni. Lapho umbozwe ngokuphelele nge nuru, ulayida umzimba wakhe phezu kwakho ukuhlinzeka ngokubhucungwa umzimba nomzimba ongasoze wakunaka. Ngenkathi uthokozela ukuphumula kwenyama, umzimba wakho uyinzuzo ekuhlanzeni nasekuqedeni ubuthi obunikezwa ulwandle. Ngaphandle kokuthola ukubhucungwa okungenakulibaleka, uthola ukwelashwa okuphelele komzimba we-herbarium okondla isikhumba sakho kusishiye sibushelelezi futhi sivuselelwe. Iningi lamakhasimende ethu liyamangala ngale nzuzo eyengeziwe yokubhucungwa. Ukwelashwa kwesikhumba okunomsoco okuhambisana nemizwa emisha nephumuzayo kwenza ukusikhipha umzimba kube ngelinye lamaphakethe wethu wokuthambisa nokuthandwa kakhulu. Ngamahora ambalwa nje, ungaqala injabulo ngokwengeziwe ngenjabulo engenakulinganiswa. Vumela umzimba wakho ukuthi ube umamukeli olungele ukwelashwa kwakudala. Uzozwa ukushisa kusuka ku-alamu. I-NEW YORK MASSAGE SERVICE EPHELELE Uma ufuna okunye kokubhucungwa okuhle kunazo zonke eNew York, cabanga ngokubhucungwa kweNuru. UNuru uqhamuka kunqubo yakudala yokushaya yomdlandla waseJapan esebenzisa isipiliyoni sobunqunu obunqunu ukuletha imiphumela ekhangayo. Siyajabula ukukunikeza kuphela izinhlobo ze-elite ze-Nuru massage. Ngokukhetha lokhu kuphulula okubucayi, uzivumela ukuthi uthokozele umuzwa ogcwele womzimba. I-massage yenziwa yi-masseuse esezingeni elifanele, esebenzisa ijeli yokuthanjiswa yemvelo yonke, igeleza isuka kolwandle olungenaphunga. Ngokufundisa ama-masseuse ethu amahle amasu akhethekile, sinikeza i-nuru kneading eManhattan. Inkampani yakho izokwethuka kamnandi lapho uzwa ukuthi ukusikhipha umzimba okwenziwa uchwepheshe kungaba kushisa kanjani futhi kungokomzwelo. Vumela ukuthi uthathwe amandla amahle. Khululeka futhi ulahlekelwe yimizwa. Siyajabula ukuhambisa amaklayenti ethu imizwa emisha ehlukahlukene ngokunikeza lolu hlobo lokuzijabulisa kwabantu abadala oluhambisana nenqubo ezuzisayo emzimbeni wakho. Amanye amaklayenti ethu asitshela ukuthi lokhu kugcoba kungenye yezinto ezihamba phambili empilweni yabo. Ujabulela izikhathi ongasoze wazilibala lapho usemantombazaneni amahle futhi athandekayo, azi kahle ubuciko beNuru Massage eNew Jersey naseNew York. Ukuzwela komzimba wakho kuzofinyelela ezindaweni eziphakeme ezingenakulibaleka ngenkathi imfihlakalo yendlela yasendulo ingeza isici esingokwengqondo ekuthokozeni kwakho ngokomzimba. UNuru akuyona i-amator massage ejwayelekile. Kungakulethela injabulo ongakaze ucabange ukuthi uyakwazi ukuhlangabezana nayo. Wamukelekile ukujabulela umyalezo namantombazane ethu avela e-NYC. Laba masseuse abahle bathola ukuqeqeshwa okukhethekile ukukunika umuzwa ongakaze uwuphuphe. Eminyakeni yamuva nje, le massage ibilokhu ithandwa kakhulu ngenxa yemiphumela ehlaba umxhwele. Ngenkathi eyi-massage evusa inkanuko, uNuru unikeza nazo zonke izinzuzo zokubhucungwa nokwelashwa. Sebenzisa leli thuba namuhla futhi nakanjani uzobuya kusasa. NURU IMASSAGE. I-EROTIC MASSAGE. Siyajabula ukukwamukela, bafethu nabanumzane epharadesi le-massage yaseJapan kanye ne-nuru massage new york. Nathi uqinisekile ukuthola idolobha elihle kakhulu le-nuru fresh york kanye ne-japanese percussion novel york. Siqinisekisa ikhwalithi ye-zenith ye-massage yabantu abadala i-nyc, futhi sihlala sixhumana njalo. Akunandaba ukuthi ukuphi lapho uhlala ezindlovukazi noma esiqhingini eside noma ngisho nase-pullover entsha, sihlala siseduze kwakho futhi sikulungele ukwanelisa izifiso zakho ezivuthiwe nezifiso eziyimfihlo. Thinta isikhungo sethu sezingcingo bese urekhoda ukuthola ukubhucungwa ngokugcwele eManhattan njengamanje. Jabulela i-erotic massage egcwele namuhla. Ukukhethwa kwe-erotic massage evuselelwe i-york okufanele sinikeze yona kukude impela. Uma uthanda i-japanese massage manhattan noma ukhetha i-bm nathi uzothola ukuzijabulisa kwabantu abadala ngokuthanda kwakho. Nabesifazane bethu, cabanga ngamasu wokuhlikihla angcono kakhulu ozoba phezulu emhlabeni. Shayela namuhla futhi uzoqiniseka ukuthi uvimbela ifoni ye-nuru massage kanye nefoni yokuhlikihla inkanuko koxhumana nabo ngekusasa! I-Japanese Massage NY ingenye ye-massage yabantu abadala elele kakhulu kubantu abadala ngoba inikeza injabulo yokuqhamuka, ivuselele umzimba nomphefumulo. Le ndlela yasendulo noma ukubhucungwa komzimba kuqhamuka e-Asia futhi kwenziwa ngama-nudes okuvuthwa kudala isifiso futhi ngesikhathi esifanayo kunikeza ukuthula nenhlalakahle kubahlali basemzaneni wase-york ongasetshenzisiwe abampofu kuwo nezingcindezi zansuku zonke. Umsebenzi womzimba onethenda nobuthakathaka uthakazelelwa izivakashi zethu eziningi ezithembekile ezisuka enkabeni yedolobha kanye nasedolobheni nasenhla nedolobha. Ngaphandle kwe-japanese massage nyc enye ye-massage yabantu abadala i-manhattan efunwa kakhulu yi-nuru ny. Lokhu kubhucungwa, i-nuru nyc, kungokwemvelo kangangokuba kungaphumelela ekuthokozeni i-massage nyc. Lapho intokazi enhle ishibilika nomzimba wayo onqunu omanzi ubhekene nowakho, umuntu akakwazi ukuvumela isifiso esingenakuphikiswa. Akumangalisi ukuthi i-nuru new york ifunwa kakhulu ku-nj. Ngabe i-shampoo yokuphela ejabulisayo isiphendukile? Noma ukuzilibazisa kwabantu abadala e-usa akukhululekile njengase-Asia ngokwesibonelo, umuntu angathola ukubhucungwa okumangazayo kwenyama kithi. Uma sithatha i-york entsha singayibheka kuphi i-shampoo yabantu abadala i-york entsha? Ingabe kukhona ukusikhipha ngamakhaza eBrooklyn? Noma ukubhucungwa okujabulisayo kokuphela eBronx? Abaningi bathi okungcono kakhulu yi-manhattan yokuqeda massage ejabulisayo. Noma kunjalo umdlalo wezemidlalo wabantu abadala awazi kahle noma yimuphi umngcele. Vumela imicabango yakho iye endle, ziphathe ngomzuzwana wokuphumula ngesikhathi esimatasa esifundeni sezezimali. Ngokuza e-salon yethu, unethuba lokujabulela umuzwa wenyama ongasoze wawukhohlwa. Ukushayisana kukaNuru sekukhona amakhulu eminyaka futhi eminyakeni edlule, sekungcono kakhulu. Abasiki bethu abangochwepheshe bakhethwe ngolwazi lwabo olubanzi nebhele elihlaba umxhwele. Noma ngabe uke wazama ukubhucungwa kwe-amator phambilini, siqinisekile ukuthi uzomangala lapho omunye wabahle bethu eqala ukwenza umlingo wakhe. Ukuzihlikihla kwe-amatory okulula akuhlangene nakancane nezikhathi ezivusa inkanuko neziningiliziwe ezinikezwa amantombazane ethu. Kusukela ekuthinteni kokuqala kuya kohlangothi lokugcina, uzozizwa ungaphezulu komhlaba. Ukuphumula okuza kamuva kungahlala izinsuku. Ihholo lethu lingafinyeleleka kuwo wonke umuntu ose-NY nasendaweni. Ukuphela kokufanele ukwenze ukusishayela ucingo futhi sizodinga ukuphindaphindwa okufishane ukulungiselela ukuvakashelwa kwakho. Iklayenti ngalinye linezinsiza ezenzelwe umuntu uqobo. Imassage yasendulo yaseJapan icela indlela ekhethekile nezincwadi ezibanzi. Lapho iseshini iqala, uzozwa ngokushesha ukuthi yehluke kanjani kunoma yini owake wayivivinya ngaphambilini. Imizwa evusa inkanuko, evusa inkanuko, emnandi, ehlaba umxhwele, nejabulisayo ngamagama ambalwa nje achaza lokho osuzokwazi ukuhlangabezana nakho. Eqinisweni, iningi lamakhasimende ethu lisenkingeni ye-akhawunti ngemuva kokuphela kokubhucungwa.
Ngingayikhangisa kanjani insizakalo yomzimba wami?
Ngingaqala kanjani ngokuhlukaniswa kweRubPage mahhala? Njengephosta yezeluleko, udinga ukudala i-akhawunti yamahhala ye-RubPage kuqala usebenzisa inkulumo yakho ye-imeyili bese uqinisekisa i-akhawunti yakho ye-RubPage. Ukuqinisekisa i-akhawunti yakho ye-RubPage, chofoza kusixhumanisi sokuqinisekisa esithunyelwe yiwebhusayithi ehambisana neRubPage. Ngokushesha nje lapho uqinisekisa futhi uqinisekisa incazelo yakho ye-RubPage, ulungele ukuqala ukuthumela izikhangiso zakho ezihlukanisiwe mahhala kule webhusayithi engemuva yokufaka esikhundleni: Ama-classifieds we-RubPage. Okokuqala khetha idolobha lapho uswele khona ukukhangisa ngezinsizakalo zakho, bese ukhetha i-oda nesigaba esingezansi sezinsizakalo ozihlinzekayo. Manje uzodinga ukubhala isihloko esihle nencazelo ngokuchaza izinsizakalo ozihlinzekayo. Zama ukuhlinzeka ngemininingwane eminingi ngangokunokwenzeka maqondana nezinsizakalo ozihlinzekayo ezifana nendawo ngqo, intengo ngehora, inombolo yocingo, ikheli le-imeyili, indawo yokugcina njll. Manje shaya inkinobho yokuveza bese umkhangiso wakho ohlukanisiwe uthunyelwa khona manjalo ku-RubPage bahlukaniswe iwebhusayithi. Njengesivakashi se-webpage ye-backpage ehlukanisiwe, kubangelwa ukuthi i-akhawunti ayiphoqelekile. Ukuphela kokufanele ukwenze ukukhetha indawo lapho ufuna ukuthola izinsizakalo ozifunayo bese ukhetha isigaba nesigaba esingezansi. Ngemuva kwalokho uzokhonjiswa uhlu lwesikweletu sokukhangisa sendawo yangakini maqondana nezinsizakalo obukade ubukeka ngazo. Zonke lezi zikhangiso ezikuma-RubPage classifieds zihamba ngokulinganisela okuhlelekile ukuze ungaboni noma yiziphi izikhangiso ezingezona ezomgunyathi noma zogaxekile, abahlinzeki bangempela kuphela abavunyelwe ukukhangisa kule webhusayithi ehlukile engemuva, ukuhlukaniswa kweRubPage. Manje, thola umsebenzi omubi kakhulu ofanele wena nosonkontileka kumhlinzeki wesevisi ngokushayela inombolo yocingo enikezwe ekhasini lesikhangiso noma ngokusobala thumela i-imeyili ku-messenger messenger. Iningi labasebenzisi beRubPage lizophendula embuzweni wakho kungakapheli imizuzu uma kungenjalo futhi uma amanani neminye imininingwane ibonakala inengqondo kuwe ungaqhubeka unikeze izinsizakalo obukade uzifuna.
Thuthukisa izinsizakalo zakho zokubhucungwa nathi ipulatifomu yethu emnandi iletha amaklayenti afuna ukugcotshwa komzimba nokuhlikihla izikhangiso zakho. Amaklayenti Abangaba Neselula angabuka imininingwane yakho yesikhangiso, izithombe, futhi bakushayele noma bakuthumele imiyalezo ngokushesha kusuka ocingweni noma kudivayisi yabo ephathekayo. Ungabuyekeza isikhangiso sakho ngezithombe ezintsha ezintsha ngqo kusuka efonini yakho. Izikhangiso ezingabizi Ukwakha isikhangiso kusongelwa ngamanani aphansi ancintisana kakhulu. Unenketho yokuthenga ukuthuthukiswa ukuqinisekisa ukuthi isikhangiso sakho siyabonakala. Ukuphathwa kwezikhangiso Sikunikeza ukulawula okuphelele kwesikhangiso sakho ngephaneli yokujwayela ukuhlela i-bodyrub yakho noma isikhangiso sokubhucunga futhi uhlanganise / ususe izithombe noma kunini lapho uzizwa khona. Futhi ungabeka kalula isikhangiso sakho uma ungasafuni ukubhaliswa. Yakha idumela lakho Ukubuyekezwa okuhle kuyithuluzi lokunikezela. Khuthaza amaklayenti akho ukuthi akunikeze izibuyekezo, futhi ungakhuphuka ngaphezu kwakho konke ukuze uthuthukise ukukhulelwa kwakho okungezansi. Asivumeli noma yiluphi uhlobo lwe-vituperate, ulimi olukhulumayo, noma ulwazi lomuntu siqu kuzibuyekezo, ngakho-ke ubumfihlo bakho buphephile. Khetha Idolobha Lakho Bheka Ukuhamba Kwethu
Amaklayenti Abangaba Neselula angabheka imininingwane yakho yesikhangiso, izithombe, futhi bakushayele noma bakuthumele umbhalo ngqo kusuka ocingweni noma kudivayisi yabo ephathekayo. Ungabuyekeza isikhangiso sakho ngezithombe ezintsha ezintsha ngqo kusuka efonini yakho. Izikhangiso ezingabizi Ukwakha isikhangiso kunikezwa ngamanani aphansi ancintisana kakhulu. Unenketho yokuthenga ukuthuthukiswa ukuqinisekisa ukuthi isikhangiso sakho siyabonakala. Ukuphathwa kwezikhangiso Sikunikeza ukulawula okuphelele kwesikhangiso sakho ngephaneli yangokwezifiso ukuhlela i-bodyrub yakho noma isikhangiso sokubhucunga bese ungeza / ususa izithombe noma kunini lapho uzizwa khona. Ungasusa kalula isikhangiso sakho uma ungasafuni ukufakwa ohlwini. Yakha idumela lakho Inhlolovo enhle iwupopayi wokumaketha we-hangman. Khuthaza amaklayenti akho ukuthi akunikeze izibuyekezo, futhi ungakhuphuka ngaphezu kokunye ukuze uthuthukise umugqa wakho ophansi. Asivumeli noma yikuphi ukuhlukunyezwa, isichazamazwi sesifungo, noma imininingwane ehambayo kuzibuyekezo, ngakho-ke imfihlo yakho iphephile.
Kuthiwani uma othile engicela ukuba ngimkhokhele kusengaphambili ngocingo?
Sicela ungabi isisulu senkohliso. Ungalokothi udlulise noma iyiphi imali noma ngabe ikhona ”ukubamba ukuqokwa kwakho”. Sicela ubike izikhangiso ezinjalo zomgunyathi kumakhasimende ethu.
Kubiza malini ukuvusa inkanuko ngokwesilinganiso?
I-Nuru Massage & Spa ku-Bodyrub nuru massage iyingxenye yokuphulula i-amatory. lokho kwavela eJapan. ukusetshenziswa kwe-masseuse kugcoba wonke umzimba, ukuphulula. isimo seklayenti ngokomzimba, ukuthintana bese kutholakala ekwelashweni kwesidala. Lapho inkulumo ethi "Nuru" ukungaguquguquki kokuzihlikihla komzimba kusuka egameni lesiJapane elisho ukushelela. kungani iklayenti, kanye ne-masseuse ihlolwa ku-nuru percussion gel kanye namafutha. Lapho ijeli no-oyela kungabonakali, kungenaphunga futhi kwenziwa ngokoqobo ngokhula lwasolwandle olungokwemvelo! Ngokuyinhloko, ukusikwa kwe-Nuru kungumzimba ogcwele “inkanuko” wokugcotshwa komzimba okwenziwa ngokuthi “onikelayo” no “uthango” babe nqunu, bese “nomnikezeli” ekhale ngokufaka inani elifanele lale gel ekhethekile yeNuru, noma into yokugcoba kuwo wonke umuntu “owemukelayo” bese uqhubeka ne-shampoo ngokuyisisekelo ngendlela efana nokugcotshwa komzimba okugcwele, bese inyukela endaweni lapho “onikelayo” eqala khona ukundizela imizimba yabo, namandla ekhono ngaphezu kwenani “labemukeli” ukubhucunga inkanuko, futhi ukusuka lapho, kuhle kuye “kumuphi” ukuyiqeda ngemuva kwesikhathi esibekiwe, noma kunoma iyiphi indawo ethambekele lapho “umamukeli” anelisekile futhi ejabule ukukuqeda. E-salon yezentengiselwano, "umnikeli" imvamisa ungumlingani ovelele, akukho ukushintshana ngezindima, noma kunjalo ezimweni ezithile, futhi ikakhulukazi ezimweni ezizimele, i-Nuru Massage ingahle ingahambelani kakhulu ngokuthi izindima zingabuyiselwa emuva ngokuhlanganyela ukuzalwa kabusha, futhi lezi zinguquko zingaba ithuluzi noma ziguqulwe, ngesikhathi esivunyelwene ngaso sonke isikhathi ngesikhathi sokubhucungwa. Awunalo iqiniso, imvamisa ungenazimpahla zokugqoka ngenkathi owesifazane ekubhucunga ngawo wonke umzimba wakhe, ezihlikihla futhi ezigqekeza ngomzimba wakho. Lokhu kwenzeka sibonga ijeli ekhethekile, yemvelo yeNuru efakwe kini nobabili. I-masseuse bese ihambisa umzimba wayo ocwebezelayo ngaphezu kweyakho, idale umuzwa oyingqayizivele wokuthinta ovusa ngokumangazayo. Ukubhucungwa njalo kwemizuzu kuya ngokuya kujabulisa. Ukubhucungwa nge-gel Nuru kuthinta inkanuko kakhulu kunokumasaja ngamafutha abalulekile. Usebenzisa inkampani ephelele ukukhulula, ukususa ingcindezi kungaholela ezingeni elihlukile lokwaneliseka. Ngempela, izikhathi ezimbili ngaphandle kokukhululeka kwezingubo ezisebenzisanayo, ukusebenzisa i-gel Nuru eshelelayo kakhulu kungadala injabulo enkulu. I-Nuru massage kanye ne-Soapy massage efanayo ithandwa kakhulu futhi iyathandwa izivakashi eBangkok. YENZA Ukuqokwa Khetha ukutholakala kwe-Nuru Massage Erotic Massage Massage Massage Sandwich Massage Full Body to Body Massage Happy Ending Massage Female to Male Massage Deep Tissue Massage Lomi Lomi Massage Aroma Therapy Massage Thai Massage Sports Massage Couples Massage Hot Stone Massage Swedish Massage Full Body Massage Shiatsu Ukwelashwa kwe-Massage Balinese massage Owesilisa kuya kowesilisa Massage Okunye
I-Hottest Nuru Massage Escorts Escorts Jabulela I-NURU Massage Provided's Las Vegas's Finest Chances lapho ukhuluma ngomuntu "nge-massage", bayomomotheka futhi bazindle ngokuphumula abazokujabulela nalokhu kuzitika okuyisimangaliso. Hlanganisa ukubhucungwa kosuku nensikazi enesitsha, futhi uzojabula ngokuphelele. Abaphelezeli bethu bonke banolwazi lokuhlinzeka ngemasaji yazo zonke izimpawu kumakhasimende afanelwe ukuhlangana okugcwele amaphupho abangawakhohlwa. Noma ngabe ungumthengi okokuqala ngqa noma uyi-VIP enomlando, ukuhamba kwethu kulungele ukukubonisa ukuthi imassage engaba mnandi kangakanani. Kuyini ukusikwa kwe-NURU? Uma uzicabange wedwa, “ngingayitholaphi i-NURU massage eduze kwami”, uze endaweni efanele! Abuhle bethu baseLas Vegas bayazi ukuthi amaklayenti abo azizwa esuthe kangakanani ngemuva kokwenziwa kokubhucungwa. Ngenkathi ukusikhipha umzimba okungenakuphikiswa kuphumule impela, ukushayisana kwe-NURU kudlulela ngalé kwalokho uma kukhulunywa ngemizwa ozohlangabezana nayo. Uma wabelana nge-Las Vegas NURU massage ne-escort, nobabili nizokwehlisa ize. Umgibeli wakho uzosebenzisa ugcobo olushelelayo ukuze akhuhlise umzimba wakho. Ngemuva kwalokho, esikhundleni sokumane afake iminwe yakhe ku-muscle Petrie, uzokwenza ngokwezifiso umzimba wakhe ukukunikeza ugqozi lwemisipha. Yonke le nqubo ivusa inkanuko futhi iyajabulisa ngokweqile. Kwenzekani Ngesikhathi Sokubhucungwa Kwe-Las Vegas Tantric? Ukuze umboni uqiniseke ukuthi uzokukitaza, funa ukuzama ukusikhipha i-Las Vegas Tantra ngomunye wabasizi bethu abathandekayo abalawula ikusasa lakho. I-Tantra massage ingumuzwa ovusa inkanuko lapho umculi wakho we-percussion ethambekele ezindaweni zakho eziyinhloko emzimbeni. Ngenkathi la mabhande egxile kuwo, i-massage yenziwa kancane futhi ngokwakha ukulindela okuningi. I-masseuse yakho e-sexy ingaqala ukuthambekela engxenyeni ethile yobuningi, kepha ingahambeli kwabanye ngokushesha. Ngokugxila endaweni erogenous, imizwa yakho izophela. Lapho ethuthela kwenye indawo, amandla akho akhiwe ayochichima, futhi uzozizwa waneliseke ngokuphelele. I-Las Vegas Tantra massage nayo yenziwa ngenkathi zombili izinhlangothi zinqunu ukukhulisa injabulo yakho yonke. Ngibhukha Kanjani Ukubhucungwa Kwe-Asia eLas Vegas? Kungenzeka wake wezwa ukuthi ukuthola i-massage yase-Asia eLas Vegas kufanele nakanjani uma uzoqasha umuntu ozokuhlikihla. Abesifazane bethu base-Asia bayabukisa futhi ngendlela abenza ngayo amathalente abo ukukhokhela amaklayenti ethu ngolwazi lokuhlikihla abangasoze balukhohlwa. Ukushaywa kwe-Asia kuhluke kancanyana kunokwendabuko njengoba kunamasu asetshenziselwa ukukhuthaza umzimba nokukhipha imisipha ngasikhathi sinye. Amadoda amaningi afunga ukuthi ukukhokha i-masseuse yase-Asia yindlela okufanele uhambe ngayo uma ufuna ukuzizwa ugcwalisekile ngemuva kokuthi isikhathi sakho sesiphelile. Ukubekisa ukubhucungwa kwakho, konke okudingeka ukwenze ukuhlola kuma-escorts ethu atholakalayo, ufunde amaphrofayili abo, uhlole izithombe zabo, futhi usishayele ucingo noma usithumelele umbhalo ngokutholakala kwakho. Sizothumela ukuhambisa kwakho okuningiliziwe ukukunikeza ukusikhipha kwe-Asia ngokunethezeka kwegumbi lakho lehhotela noma ekhaya. Ibiza malini i-Las Vegas Nude Massage? Uma kukhulunywa ngokukhwabanisa kwe-Las Vegas nude massage, amanani azohluka ukuthembana ngesikhathi onxusela ngaso iseshini yakho. Abasizi bethu bayatholakala ngezinsuku ezihlala isikhathi esingangehora noma ezinabile njengasebusuku. Ngenxa yokwahluka kwezicelo zesikhathi, amanani ahlinzekwa wena ngesizini obhuka ngayo isikhathi sakho. Ngamunye wabesifazane bethu naye unokwehluka kwamanani entengo kuye ngesikhathi sabo nenkampani kanye nokufunwa okuphelele. Uzothola ukuthi, nokho, ukuthi ukuthola massage komunye wabasizi bethu abahle kuzifanele izindleko ezibandakanyekile. Sidinga ukuthi inkokhelo inikezwe kusengaphambili ngezinsizakalo zokuqinisekisa ukuthi i-masseuse yakho ibhukhwe sonke isikhathi esibekiwe osifisayo. Ngingakhetha Yini Onginikeza Ama-Rubs Omzimba Las Vegas? Uhlala unesenzo se-vamp uma kukhulunywa ngekhotheshini yomculi wakho wokubhucungwa. Noma ngabe uyantula ukuzama i-tantra, i-NURU, noma nje ubhucungwa ngokwendabuko kusuka entombini eyi-horny, uzofuna umuntu omthola ekhanga ukuthi ahloniphe. Sinezinketho eziningi kangaka ongakhetha kuzo, ungaba nobunzima bokukhomba lowo wesifazane okhethekile. Thatha isikhathi sakho ubheke amaphrofayli esiwanikeza lapha kusayithi lethu. Funda imininingwane bese ubheka izithombe kuze kube yilapho uthola umdwebi wokubhucunga ophakamisa intshisekelo yakho. Konke okudingeka ukwenze ukuthola ukugcotshwa komzimba eLas Vegas kulo wesifazane ucingo noma i-SMS ukuthola ukutholakala kwakhe.
Ngabe ukubhucungwa kweNuru kusemthethweni e-United States?
Siyakwamukela ku-Vanilla tantric massage ejensi yaseLondon. Omasisi bamboza iNuru kneading London, Erotic massage London and Sensual massage London. Sisebenze iminyaka eminingi manje, ngobuningi bamasseuse enkanuko abanekhono kakhulu. Amantombazane amaningi esimele eLondon aneziqu zobungcweti zokwelapha, kanye nokuhlangenwe nakho kwemfucuza kubuciko beTantra.Ukuhlangana kweTantric eLondonKunezindlela eziningi ezingafani zokuhlikihla kwezinkanuko, kepha ngokusobala okuvame kakhulu ukubizwa ngeshampu yethu yeTantric eLondon. Zombili lezi ziyatholakala ezintombini ezinethalente kakhulu eVanilla tantric massage. Zidinga ubungcweti obuthile, kepha lokhu kuyinto eyenziwe ngabasizi bethu ngokuhamba kwesikhathi. Uma nje usuthole umlingo wokuthinta kwabo, uzoqiniseka ukuthi bangabantu bendalo ngokuphelele. Ukuzihlikihla kweTantric eLondon kuyindlela ecishe ifane nezulu yokukhuleka komzimba okukunikeza ukuthi uzinikele ngokuphelele kumakhono we-masseuse yakho. Idizayinelwe hhayi ukujabulisa wena nokukunikeza ukuphela, nokuthanjiswa okungenakugwenywa kobulili izinsizakalo ze-tantric ezaziwa ngakho, kepha kuzokwenza futhi ukhululeke ngokumangazayo, kudambise noma ikuphi ukucindezeleka namandla futhi kukuvumele ungene esimweni somoya esimnandi, esingaphumeleli kwengqondo. Amaklayenti ethu ashiya umuzwa wokuthula nesikwele esifanele nomhlaba futhi uqobo lwawo.UNuru ehlikihla iLondonKu-Nuru massage London metaphysics, ubunqunu abumele isithiyo ekugcwalisekeni kwangaphandle nangokomoya kepha kubuyela esimeni sokuqala sowesilisa, lapho owesilisa nowesifazane imele ukuphelela nokuqala ezimfihlakalweni zobulili akuzange kushiye ukuhlanzwa nokwenyuka okungokomoya. INuru iphulula inkantolo yaseLondon umzimba wonke, hhayi nje izindawo ezine-erogenous nezitho zobulili, ezibizwa ngokomfanekiso ngokuthi iLingham ("isibani sokukhanya" noma "iqoqo lemisebe" ngesiSanskrit) kanye neYoni ("indawo engaphunyuki"). I-Nuru massage London yinto evame ukulingiswa odokotela abancane bokuhlikihla izinkanuko eLondon, futhi kuphela uma uthola ukwelashwa kwangempela lapho ungaxhumana khona umehluko. Isikhungo sokubhucungwa i-Nuru eLondon esizungeze i-lubricant esakhelwe ngokukhethekile lolu hlobo lokubhucungwa - i-gel yeNuru. Uma kungeyona i-Nuru gel, akuyona i-Nuru massage yaseLondon ngokuyisisekelo. Lesi ngesinye sezinto ezibushelelezi kakhulu emhlabeni, futhi sisebenza ngokungenaphutha nomzimba wethu wenyama ekuxovuleni umzimba.I-erotic massage LondonIzinzuzo ze-Erotic massage London zombili zingokomzimba nezingokwengqondo noma ezimsulwa. Impela, ukusebenza kwe-Erotic massage London kuncike kakhulu kulwazi lwabasisi bethu abanekhono kakhulu. I-massage ye-Erotic eLondon ingabhekwa njengomdanso we-pilfer esikhunjeni somlingani. Yisitho somzimba esibucayi esikhulu kunazo zonke futhi singakhiqiza injabulo enkulu. Okokuqala udinga i-lotion noma i-massage anoint.I-massage yesibili eLondonI-massage yesibili eLondon ifaka inhlanganisela yokuthinta ngothando okududuza kokubili into nokwazisa, ngasikhathi sinye, ukuvusa amandla wempilo aziwa njengamandla ezocansi. Lokhu kuthakazelisa kwamandla ezocansi ngokubhucunga izinkanuko eLondon kuhlala kuhamba kancane futhi isikhathi ngasinye kuqondiswa ngokuqonda. Kungani uhlelwe futhi wazi? Ngoba ukuthakazelisa kancane kancane kubangela ukuthi inkanuko engaba namandla iguqulwe ibe ngamandla amakhulu, bese-ke iqondiswa ngokucophelela yilowo onikela ngokuhlikihla okungcolile eLondon kuyo yonke indawo yalowo obhuciwe. Ngakho-ke, ukutholakala kokunwetshwa, injabulo, ukugcwaliseka ngaphandle kwento kufinyelelwa kalula.Izinsizakalo zethu zokuthambisa imizwa eLondon Nazi izinqumo ezimbalwa ezimsulwa ezenziwa amaklayenti ethu. Ungathola okuningi ngomunye wabo njengoba uzulazula kwiwebhusayithi yethu, kepha uma unemibuzo, sicela ungagxili ekuthintaneni nathi ngemibuzo yakho.Ukubhucungwa kweTantricUkubhucungwa komzimba noma ukusizakalaI-massage yeNuruUkuthanjiswa komzimbaI-Prostate massageI-massage yamadoda amaneI-massage yabantu abadalaI-massage ne-Tease kungukukhetha “okuyisisekelo” kokumasajwa kwenyama emhlatshelweni eVanilla, kubalulekile ukuthi sisho ukuthi amantombazane onke asebenza nathi, onke anezitayela zawo ezihlukile. Ukuphulula i-tantric nenye yamantombazane eVanilla kungahluka kakhulu kunenye. Bebelokhu beyi-massage ye-tantric yangokwezifiso iminyaka eminingi futhi banezitayela zabo, kuphela ukunikela ngensizakalo engcono kakhulu abangayenza. Kunconywa kakhulu ukuthi uzame amantombazane ahlukahlukene ekubhukeni okuphindwayo, ukuze uthole okuthandayo. Siyaqiniseka ukuthi lokhu ngeke kube ukuzimisela okulula ukukwenza, noma kunjalo! Amantombazane ethu eLondon tantric massageAmantombazane aqhamuka ezizindeni ezahlukahlukene ezikude, futhi empeleni avela kuwo wonke umhlaba. Bazinze lapha eLondon ngoba benzela umusa impucuko yomhlaba wonke enikezwa lapha, futhi bayathokoza ngenani lamakhasimende anentshiseko yokubhucunga izinkanuko. Zonke zinobungane futhi kulula ukukhuluma nazo, ngakho-ke uma uthambekele ekukhathazekeni okuncane, zizoqiniseka ukuthi zikwenza ukhululeke. Empeleni, lapho sivuma ukumela omunye walaba masseuse eVanilla, sithanda ukudala ukungaphutha ukuthi bayathandeka ebuntwini babo njengoba kunjalo ekubukekeni kwabo. Kubaluleke kakhulu ukuba ne-massage yenkanuko nowesifazane omuhle, konke kunezela ekujabuleleni konke kwesipiliyoni. Kepha uma engakulungele ukuxoxa nokuba nobungane nawe ngaphambi kokuqala komlayezo wakho, ngeke alunge.Ukushaya kwakho i-tantric London kufanele kube yinto ongasoze wayikhohlwa. Lokhu kuyinjongo yethu, ngakho-ke ukukhetha kwethu amantombazane kufanele kube okuphelele. Bonke kufanele babe namakhono adingekayo futhi, yebo, lokho kungahambisani nezenzo. Bonke bazi kahle i-tantric, i-Nuru nobungako bezinsizakalo zokubhucungwa komzimba, phakathi kwabanye abaningi. Futhi khumbula, njengoba sibala ngaphambili, ngalinye lamantombazane linikeza isitayela esihluke kakhulu.I-shampoo yethu ye-tantric ezindaweni zaseLondonTantric Massage ChelseaTantric massage Gloucester RoadTantric Massage MayfairTantric Massage South KensingtonTantric Massage PaddingtonTantric Massage KnightsbridgeTantric Massage Edgware Road Tantric Massage Maserry Baker Street Massage Victoria Tantric Massage Notting HillTantric Massage Chelsea Bridge WharfIncall and outcall London massage servicesAmantombazane akhethiwe ukuhlinzeka nge-amator massage yakho abekwe ezindaweni ezahlukahlukene eziseduze neLondon. Lokhu kungenxa yokuthi baqhuba amabhizinisi abo we-masseuse emakhaya abo. Zonke zinamafulethi akhululekile futhi atholakala ngokulula okulula ukuwathola. Banendawo yokugeza ephelele ongayisebenzisa, ngaphambi nangemva kokubhucungwa kwakho kwe-tantric, futhi bazokunikeza ukuqabuleka okungaphezu kokuthembisa. I-masseuse yakho inikezelwe ekuphumuleni kwakho ngesikhathi sokubhuka kwakho.Uma ungathanda ukubambezeleka ngokunethezeka ekhaya lakho noma ehhotela, sikujabulele kakhulu ukuthumela omunye wabasizi bethu endaweni yakho. Kuncike ekutheni awutholakali kude kakhulu, futhi useCentral London.
Ukubala kwezwi: 1166
Uyini umehluko phakathi kwezigaba kuwebhusayithi?
I-Tantric massage Kusuka ekuphathweni kuya ekuzijwanyeni okuyingozi. I-massage ye-Tantric ibuyisa i-lift yakho, ithoba, iqede ukungezwani. Ukuzindla ngomculo, iphunga namakhandlela kukucwilise enkambisweni yobulili. Kuvusa amandla angaphakathi futhi kubaqondise ezinhlosweni zangaphandle nezangaphakathi. Ngaphambi kokubhucungwa, uzolahlwa usawoti noma ushukela ku-hamam, ukuze umzimba wakho ubonakale kuyo yonke imikhakha yolwazi lwamandla, ufudumeze amatshe bese uqhubeka nokuhlikihla ngomlingo. Phakathi kwezinhlobonhlobo zokuhlikihla ngobungcweti - ikakhulukazi kwabesifazane i-massage evusa inkanuko ibonakala ngokuqamba kwayo nangokushintshaniswa kwamandla okhethekile phakathi kwesiphululi sowesilisa kanye ne-bitch. I-Tantric massage NYCTOkuvelayo ukuthi inhloso ye-strant tantric stroking e-NY ukudalulwa kwamandla ezocansi, ubungqabavu nokwanda kokuzwela, ukugqugquzela ukubuyela emuva kwezocansi okufihliwe nokutholwa kwezindawo ezazingaziwa ngaphambili emzimbeni ukuze uthole i-orgasm ekhanyayo ne-libidinous I-Tantric massage e-NYC iyindlela emangazayo yokwembulwa kwengqondo nokuzivikela kwakho ngokwazi komunye nomunye, ngokuxhumana okujulile ngokomzimba, kokuthokozisa nangokwebandla. Isisekelo senqubo ye-tantric massage New York - ukutheleleka, ngoba kuthinta ukushintshaniswa kwamandla. I-Tantric Massage eBrooklyn I-massage ye-Tantric eBrooklyn iyinhlobo yokuqabuleka, lapho ikhasimende liqinisekiswa hhayi injabulo kuphela, kepha futhi liyaphola. Uzonikeza injabulo kulabo abafuna ukuzama okunamandla, kepha ngemizwa efanayo yokuthambeka, ezolandelwa Inhlanganisela yokumanga nokuthinta inkanuko yomzimba onqunu we-nymph enhle, ukunambitheka okunoshukela kokuqabula kuzokuvulela zonke izinjabulo zempilo yepharadesi. Lokhu kugcoba kuzothuthuka ekudlulisweni kwegazi emisipheni nasesikhunjeni, usizo buyisela ebusheni futhi uqinise impilo. Ngemuva kokuhlala, uzozizwa ulungiswa kakhulu. Ukushayisana kweTantric kuzokusa emhlabeni wokuhlangenwe nakho okungokoqobo, okumnandi ngempela, ukuzwa isigqi senjabulo. I-Tricric shampoo eManhattan ngumkhuba lapho ababambiqhaza beyizithandani. Ezinyathelweni zokuqala zokuthuthuka koxhumana naye kunethuba lokuzwa amandla ezocansi, ukuzwa imibono yokuqala ngenjabulo yangempela. Uma sikhuluma ngenqubo yokuxova, khona-ke awekho amaphuzu alandelanayo kuyo. Le ndlela ivumela amadoda nabesifazane ukusinda kulezi zimo ezilandelayo: Ukuqabuleka; Ukukhululwa emizweni engemihle; Ukuvuselelwa nokubuyiselwa komzimba.Ukuvuselelwa nokubuyiselwa komzimba.I-Tantra iqinisa ubudlelwano phakathi kwabalingani, ibakhuphulele igxathu eliphakeme. Ukuzijwayeza ukubhucungwa okunjalo, ungaziqambela amaqhinga akho we-hypostatic azoletha injabulo nokukhetha okukhazimulayo kuwe nakothandekayo wakho! Zama ukushintshwa unhlangothi, ukushoshozela, ukushaywa izandla okuncane nokuhlikihlwa. Fafaza umzimba womlingani ngokukhanya, ukuqabula okungabonakali kahle, ukugcobe esifubeni noma ezinqeni. I-Tantric massage midtown Ukubhucungwa okunekhono kusiza ekuhlanganiseni imizwa yombhangqwana. Kuyaqapheleka ukuthi indawo yenhliziyo yamandla echazwe emibhalweni yamaTaoist kanye neTantric, kanye nezindawo ezine-erogenous ezivezwe ososayensi baseNtshonalanga-izazi zocansi, zivame ukuqondana.I-massage ye-Tantric maphakathi nedolobha ingenye yezindlela ezingcono kakhulu zokufunda izici zezindawo ezine-erogenous. I-Massage tantric Midtown, njenge-caresses emdlalweni wothando, kumele ihlangane. Kunconywa ukuthi ubeke izindawo lapho imizwa i-jocose ikakhulukazi, ngosizo lomsindo olinganayo, ukuze ungagudluzi isihlangu bese wehlise umphumela wezocansi. EMpumalanga, izintende nezinyawo kubhekwa njengama-microcosms omzimba. Izinyawo zidinga kakhulu ukubhucungwa kunamasundu, ngoba usuku lonke ziboshwe ngokuqinile ezicathulweni futhi akuvamile ukuthintana nezindawo zemvelo - umhlaba, isihlabathi notshani. I-Tantric stroking Queens Ngenqubo yokuphumula kwe-tantric, amantombazane aseQueens ahambisa ukuphela kwezinzwa okuhlukahlukene emzimbeni wonke, ngokuthinta okulula, ukuthinta nokushaywa unhlangothi. Ithonya ezikhungweni zamandla nokuphumula kokuphela kokuqina kuzokubandakanya emuzwa ongenakulibaleka wenjabulo. Ngemuva kwamaseshini okuqala, uzokhululeka ngokwengeziwe, uzethembe ngokwengeziwe, unganaki i-helter-skelter overstrain yezinzwa, ukucindezeleka nokukhathala okungapheli. Kithina, ungena ezandleni ezinokwethenjelwa nezimnene lapho kungafisa ukufika khona kaninginingi.Umehluko phakathi kokuphumula kwe-tantric esikhungweni sethu nezinhlobo zaso zokuhweba ukuthi lapha uthishanhloko angathola uhla olubanzi kakhulu lwemizwa, ngoba lapha akunamkhawulo futhi kuvinjelwe lokho okuvunyelwe. Amantombazane anakekelwa ngothando nangokwezocansi kuwo wonke amaseli omzimba wakho. Vumela inhloso, uvulele injabulo engakhohlwa. I-Tantric massage ijezi elisha I-Tantric massage eNew Jersey njenganoma yiluphi olunye uhlobo lokuzihlikihla, ivuselela ukujikeleza kwegazi, ithuthukisa amandla omzimba, imetabolism, iqeda ukungezwani kwemisipha futhi ithinte amaphuzu akhethekile nezindawo zomzimba wethu ezihlotshaniswa nezitho zangaphakathi. Ukuvusa amandla ezocansi, ukubhucungwa kwe-tantric kukunikeza ithuba lokungenisa ngokuphelele uthando lwakho nothando lwakho, ususe izakhiwo zezocansi nokwesaba, kukusiza ukuthi ufunde ukucabanga nge-inspirit yakho, ufunde ukwazisa nokwazisa wonke umzuzu wobumnandi. Ukuguqulwa kwamandla ezocansi ngokuzindla kungumqondo oyisisekelo we-tantra, ngakho-ke kungukuvuka kwalesi senzo, ukudonswa kwaso kanye noguquko lwayo olubhekiswe ekuhlungeni i-tantric e-NJ. I-Tantric rubbing yedolobha Kusukela isethi yasendulo i-TANTRIC MASSAGE yaziwa njengesiko lokuphulukisa, umhlangano okwazi ukuthola amandla kumuntu nentsha. Umlingo wokuthinta uqukethe amathuba amaningi okuthuthukisa hhayi kuphela isimo somzimba, kodwa futhi nesomzwelo. Ukuxhumana ngokubambisana kukuvumela ukuthi uzikhulule ekubambeni okungadingeki, okuthi ngenxa yempilo yanamuhla ejwayelekile kuwo wonke umuntu. Ukusuka lapho ulindelwe khona, ukubhucungwa kuyinto ethintekayo eklanyelwe ukujabulisa bobabili ababambe iqhaza isenzo, ukujabulisa yonke inzwa nokugcwalisa injabulo. Ulimi olungenamagama, olunikeza izikhathi zokuhawukela, oluholela ekungabikho, okukuvumela ukuthi ulinganisele ohlangothini oluhle lwangempela nolungelona iqiniso. Lolu hlobo lokwelapha ukubhucungwa luhlukile, ukusebenza emzimbeni ngalo kuphumelela ngosizo lokuthinta okuncane nokuqabula. Amasu wendabuko lapho enza le ndlela ngumsiki awasebenzi. Inqubo yokubhucungwa komzimba yenzeka ngaphansi komculo opholile opholile, ungenziwa ngumuntu oyedwa noma abaningana. Asikho isiqondisi esithile kanye nedivayisi yokuqalisa kweseshini, kanye namasu afanele wokuyisebenzisa.I-Tricric massage ihluke kakhulu kolunye uphawu lokubhucungwa. Umgomo wakhe ukuphumula futhi aqondise amandla akhe ekuhlanzeni nasekuqedeni umzimba, ingqondo nomphefumulo. Umphumela uba ukukhululeka nokuqina kwesikhumba, uhlanze i-thew kanye nezitho zangempela.Ngaphambi kokuya kuseshini yokuhlikihla i-tantric, thola okuningi okuphansi okuthinta le nqubo. Uma ungakwenzi, ungamangala kakhulu (kokumnandi nokungathandeki). Ukubhucungwa umzimba kwenziwa ekukhanyeni okuphansi, bobabili ababambiqhaza be-massage, njengomthetho, bahamba ze, umelaphi wokuhlikihla uhlose ukuvula amandla avinjiwe, aqoqeka ikakhulu ngendlela ecindezelayo yokuphila, lapho umuntu engazi lutho ngaphandle izibopho. Kubalulekile ukusuka kude nezwe langaphandle futhi uqonde ukuthi kwenzekani kuwe okwamanje, jabulela ukuthintwa okuthokozisayo kwesazi sokubhucunga umzimba, uwoyela onephunga elimnandi kuyo yonke into efihliweyo yomuntu wakho. kugxilwe kuphela ekushayweni kwesitho sangasese (i-lingam kowesilisa ne-yoni kowesifazane). Inhloso yalo mkhiqizo ukukhokhisa umzimba ngokuPhila, ukuzwa umuzwa wenjabulo nokukhululeka, ukuqeda amahloni, ukwazi amakha alo, kanye nokwabelana ngokuvusa inkanuko futhi, ngemuva kwalokho, ukufeza i-cum yomzimba nengqondo.
Yimaphi amazwe namadolobha owasebenzelayo?
Ukubhucungwa umzimba nge-Erotic West New York Ukubhucunga umzimba I-New New York, Izingcingo ze-parlors massage enqunu e-United States UKUPHELELWA NGOKUPHELELE NGOKUPHAKATHI Ngaphandle kokusondelana, kepha… akubonakali kusondelene kakhudlwana! Ukubhucungwa okwenziwa othandekayo kuletha izinzuzo eziningi ekuhambisaneni kunokuthi ngisho nokuhlikihla okunobungcweti okwenziwa ngumuntu wobulili obufanayo, ngoba kulokhu ukusebenza kwamandla ezocansi kwenzeka ngokuzenzakalela emzimbeni wabhucungwa kanye nemifudlana imizwa ye-orgasmic evela endaweni ye-Erotic massage eNtshonalanga New York ithuthukisa umphumela wesenzo somshini. Ungasebenzisa konke okonakele nezindlela eziza engqondweni. Ukubhucungwa kwabantu abadala.Ukubuyiselwa emuva kwimeyili ye-elekthronikhi.Yisiphi isibonelo sokubhucungwa? Ingabe Inkampani Yakho I-Erotic massage West West Ngokomthetho? Sibheka kakhulu inqubo ye-massage yakudala, ukwenza ukuphumula. Konke lokho ezemidlalo phakathi kwabahlanganyeli ababili balo mcimbi, kuncike kuphela ekuthanjisweni kwe-Erotic West West York ngokwabo. Sifuna ukukuphatha njengomngane, ukusikisela okuvusa inkanuko ukuvakashelwa okusemthethweni okusalindelwe, kepha ngohlobo oluqotho nolunodlame. I-Happy enging stroking NJ i-Happy enging massage NJ ingaphetha nge-Erotic massage West New York ngezinhlobo eziningi zamasu - empumalanga, okungukuthi, iThailand noma iNdiya, iRussia, iYurophu, kepha hhayi ukuthi yehliselwe kunoma iyiphi yazo. isikhala eduze kwendlu yakhe. Ngangine-orgasm esiswini sami, noma kunjalo. Ngemisipha yengcindezelo awukwazi ukuma emcimbini, umthelela onamandla abazowuthanda njengokuphulula kamnene. I-Happy enging rubbing eBrooklyn izama ukuveza njengento engenasizotha, sikulungele ukusekela umbono wethu ngentshiseko! Ukuthokozisa ukubhucunga ijezi elisha I-Happy massage yisiqalo esihle kakhulu esivela eNew Jersey.Abashadikazi abangasebenzisi ebudlelwaneni babo bezocansi I-Happy enging massage New York , konakalisa okuningi! Ukuhambela kwami ​​kokuqala kwaqondana nokuphela kobudlelwano beminyaka eyishumi. Njengoba noma ubani efuna. Ukudideka okuvusa inkanuko eWest New York, Ukuthanjiswa okujabulisayo kokuphela eWest New York, eNew Jersey Ungasebenzisa zonke izindlela nezindlela ezifika engqondweni. Nazi ezimbalwa zazo: Uzothola lapha umoya ophakeme ophulula esimweni esimnandi esinamasseuse amahle. I-First City State Code Hlangana nocansi Thola i-fuck Thola imbongolo I-massage ye-Erotic West New York West New York New Jersey US 6246 yebo cha 07.10.2010 39 yebo yebo LRLL 61 LRLL 26.09.2018 ay LRLL 25 no no 66
“I-shampoo ejabulisayo” ukusikhipha isiphetho ngokuthintana kwe-amator phakathi kweklayenti kanye ne-massage Therapist. Imvamisa, kunesixwayiso sokuthi ibhulashi lezocansi likumenyu ye-spa — ngokwesibonelo, i-innuendo egameni le-spa. Imenyu ye-spa nayo ingabhalwa ngendlela ebonakala ingekho, njengezindlela zokwelapha ezisebenzisa amagama anjengokuthi "ukugcotshwa umzimba wonke," "ukubhucungwa umzimba," "ukubhucungwa amathanga," noma "ukubhucungwa umzimba nomuntu." Yize ukubhucungwa umzimba e-Asia kunomlando omude kwezokwelapha namasiko, igama elithi "ukubhucungwa kwe-Asia" kwesinye isikhathi lingaba yikhodi yokuthi indawo yokuvakasha igcwalisa ukuxolela okunempumelelo. Ingabe Ukubhucungwa Okujabulisayo Kusemthethweni? E-United States, i-shampoo ejabulisayo ayikho emthethweni futhi ayenziwa ezindaweni ezifanele. Ngaphansi komthetho, ukugcoba okujabulisayo kubhekwa njengokuthengisa ngomzimba. Ama-spa amaningi enza ukubhucungwa okukhangayo ayizindlela zobufebe futhi ahlala esematheni ngokushukunyiswa ngamaphoyisa futhi avale - okuyinto okufanele uyikhumbule uma kufanele ucabange ukuba yikhasimende. Amakhasimende akhona ngesikhathi kugaselwa asengozini yokuboshwa. Enye ingozi yokufuna ukubhucungwa okujabulisayo ukuthunyelwa e-spa ehlose ukukhwabanisa amakhasimende. Kwesinye isikhathi ama-spas azikhangisa esebenzisa izinciphiso zokuxhumana okuvusa inkanuko kuma-spa abese eyalela amakhasimende imali yokungena, imali yokuphuza, nemali yezinsizakalo-ngaphandle kokwenza izenzo zocansi ezisikiselwe. Ochwepheshe abaningi bokuhlikihla ababanjwa besenza noma benikeza ukubhucungwa okujabulisayo ngobungozi bokulahlekelwa yilayisense yabo. Kubuye kube ukwephula izimiso zokuziphatha zebhizinisi le-shampoo ukuthambisa ikhasimende ngendlela evusa inkanuko, noma ngabe ukuthinta kuyavuma. Uma uzibuza ukuthi ngabe umelaphi wakho we-massage ukuthinta ngokungafanele yini, thembela imizwa yakho. Kuyinjongo yokuthinta, hhayi indawo yokuthinta, okubalulekile. Yize umelaphi wokubhucungwa okujule kakhulu angabeka izandla zakhe phansi kwe-pelvic noma kwenye indawo esondelene nomzimba wakho ngesikhathi sokwelashwa, lokhu kungaba ukwelashwa ngokuqinile. Imvamisa, kepha lokhu kwenziwa kuphela ngemuva kwezikhathi eziningi lapho kulindelwa khona ukwakhiwa nge-massage Therapist. Akunandaba, uma uzizwa ungakhululekile ngesikhathi se-shampoo, yazisa owelapha ngokushesha. Ngabe Kuhlale Kufanelekile Ukucela Ukusikwa Okujabulisayo? Cha, akufanele neze ukucela ukugcotshwa okujabulisayo kunoma yimaphi ama-spa asemthethweni noma ngesikhathi sokubhucungwa egumbini ngaphakathi. Yebo, ukusikhipha umzimba kungabonakala njengesimo esisikisela inkanuko noma inkanuko — ngemuva kwakho konke, uhamba-ze ngaphansi kwamashidi — kodwa kuwukwephula ukwethembana nomelaphi wakho wokubhucunga ukucela okuthile okungaphezu kwamandla akho. Ukucela i-shampoo ejabulisayo kungakwenza ube namahloni kanye nesiphetho esinqanyuliwe seseshini. Okungenzeka ukuthi uzobhekana nomeluleki we-massage ongakhululekile ozokutshela ngemingcele yomsebenzi. Kuthiwani Ngemassage Ejabulisayo Emazweni Angaphandle? Ukubhucungwa okujabulisayo kulula ukuthola phesheya kwezilwandle, ikakhulukazi eThailand (Bangkok) nase-Indonesia (Bali). Kodwa-ke, ukuthi zitholakala kalula kanjani, akusho ukuthi zisemthethweni. ICebu City ePhilippines yaziwa ngokubhucungwa kwe-lingam — okugcina ngokuthanjiswa kwe- “lingam” —kodwa nalolo hlobo lokubhucungwa lwenziwa mbumbulu ngo-2010. Abephula umthetho wokuvinjelwa bangaqukatha unyaka ejele kanye nenhlawulo cishe yama- $ 100. E-Bali kulula ukuthola ishampu yezomnotho, esemthethweni, kepha futhi kujwayelekile ukuthi unikezwe ukubhucungwa okujabulisayo noma ngabe ubungasifuni. Ukudayisa ngomzimba akukho emthethweni, yize kuvame ukubekezelelwa e-Indonesia, kepha kule minyaka embalwa ephelile iziphathimandla zase-Indonesia bezivala izindawo zokuhlala ezinikeza ukubhucungwa okuvusa inkanuko nezindawo ezisebenza ngaphandle kwamalayisense afanele. I-Thailand yaziwa kakhulu ngokubhucungwa kwabo okujabulisayo, kwesinye isikhathi okubizwa ngokuthi yi-stroking ekhethekile, futhi kusabalele. Ngenkathi ukuthengisa ngomzimba kungekho emthethweni eThailand, izindawo zokubhucunga izinkanuko zingabhaliswa njengomsebenzi osemthethweni. Kunezindawo ezithile zokubhucungwa zaseThai ezinikezela ngokubhucungwa umzimba okujabulisayo, kepha iFederation of Thai Spa Associations icindezele uhulumeni ukuthi abambe lezo zinhlobo zeminikelo. Akunandaba ukuthi ukuphi emhlabeni, ungacabangi ukuthi ungathola ukuxhumana kwe-amatory e-spa futhi uqaphele imiphumela engaba khona uma ungathola noma ucele oxhumana naye ovusa inkanuko .. Male vs. AmaMassesees besifazane Ngabe lo mfana onyaweni ubewusizo? Siyabonga ngokusilibazisa yazi! Yabelana nge-imeyili ye-Pin Sitshele ukuthi kungani!
Ingabe imininingwane yami iphephile kuwe?
Okuhle kwe-Erotic UNuru Massage eNew York Ufuna isimo esihle kakhulu sokubhucunga iNuru e-NYC? ENuru Studio, uzohlangana nabesifazane abahle abangakuhlelela isikole esiyingqayizivele sokubhucungwa. Ama-masseuse akhululekile ukushintsha futhi enze ngezifiso ukubhucungwa okuvamile kwezocansi ukuze ufeze amaphupho akho. Ngokushesha nje lapho iseshini sesiphelile, uzocabanga ngokuthi ungaminyanisa kuphi elandelayo kukhalenda lakho. Abelaphi bethu abahle be-Nuru slide massage benza konke okusemandleni abo ukwenza i-massage ezokuvusa izinzwa zakho futhi ivuselele umzimba wakho kanye nokuPhila. Ukuthinta okuthambile, umoya ophumuzayo, kanye nokuhlanganiswa okumbili esikhunjeni sezinkanuko ukwenza isenzo sesikhumba. Akukho okufana nalokho ozokuthola eNuru Studio.
Ukubuyekezwa kweNuruStudio “Insiza emangalisayo. Vele ngathola ukubhucungwa uNuru noSasha, futhi kwakukholwa ngokungakholeki. Ngangikhululeke kakhulu kamuva ukuthi angizange ngikhumbule igama lami. Ukubhucungwa okuhle, ukubhucungwa umzimba okuhle nendawo enhle: yini enye ongayifuna? ” - URyan uya eSasha, NYC “ULucy uyisicebi esingaka! Isazi esimangalisayo sokubhucungwa kweNuru, nentombazane enhle impela ukukhuluma nayo. Ngikujabulele kakhulu lokhu okuhlangenwe nakho eNuru Studio. ” - UDarren mayelana noLucy, eBrooklyn “Lokhu kwaba yisipiliyoni sami sokuqala ngokuhlikihlwa nguNuru ngakho-ke ngangingaqiniseki ukuthi ngilindeleni. Ngivela kumodeli kaJulia futhi ngacabanga ukuthi muhle. Kuhle kakhulu ukuba yiqiniso ngisho. Kodwa-ke, empeleni, muhle kakhulu! Kungenzeka kanjani lokho? Intando yami ibigcwele impela, futhi ngizobuya ngithole ezinye ngokushesha okukhulu. ” - USam cishe ngoJulia, eManhattan USasha unobuntu obuhle, futhi bekujabulisa kakhulu ukudlula isikhathi naye. Akungabazeki ukuthi uchwepheshe. Ihlala ithandeka futhi imnandi. Ngincoma kakhulu futhi nakanjani sizobhukha enye inkantolo kungekudala ”- UHarry mayelana noSasha, NYC“ U-Alice uyintokazi enhle futhi okulula ukukhuluma naye. Ekupheleni kwesivumelwano, nganginesiqiniseko sokuthi ngangisezulwini. I-ladylike enhle nenkonzo enhle kakhulu. Ngangibuya ngiyobuye ngibhucwe noma yiluphi usuku. ” - UMichael mayelana no-Alice, WA
“Insiza emangalisayo. Vele ngithole ukubhucungwa uNuru noSasha, futhi bekukuhle ngendlela engakholeki. Ngangikhululeke kakhulu ngemva kwalokho kangangokuthi ngangingasalikhumbuli igama lami. Ukubhucungwa kamnandi, ukubhucungwa umzimba okunengekayo, nokubeka okuyalelayo: yini enye okufanele ubhekane nayo? ” - URyan ngoSasha, NYC “ULucy unamandla amakhulu! Isazi esimangalisayo sokubhucungwa kweNuru, nencekukazi enhle impela ukukhuluma nayo. Ngikujabulele kakhulu lokhu okuhlangenwe nakho eNuru Studio. ” - UDarren kulo lonke elaseLucy, eBrooklyn “Lokhu bekuyisipiliyoni sami sokuqala ngeshampu yeNuru ngakho-ke bengingenakuphika ukuthi ngilindeleni. Ngabheka okumelwe nguJulia futhi ngacabanga ukuthi muhle. Kuhle kakhulu ukuba yiqiniso ngisho. Kodwa-ke, empeleni, muhle kakhulu! Kungenzeka kanjani lokho? Isinqumo sami sikhishwe impela, futhi ngizobuya ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka. ” - USam ngoJulia, eManhattan “Lena indlela yokubhucungwa enhle kunazo zonke. USasha unobuntu obuhle, futhi bekungijabulisa ngempela ukuchitha isikhathi naye. Akungabazeki ukuthi unguchwepheshe. Ihlala ithandeka futhi imnandi. Ngincoma kakhulu futhi nakanjani sizobhuka esinye isikhathi ngokuzithandela ”- UHarry mayelana noSasha, NYC“ U-Alice uyintokazi enhle futhi ukhululekile ukuxhumana naye. Ngokukhishwa kweseshini, nganginesiqiniseko sokuthi ngangisezulwini. Intokazi enhle futhi etholakala kahle kakhulu. Ngangibuya ngiyobuye ngibhucwe noma yiluphi usuku. ” - UMichael mayelana no-Alice, WA
Ufuna indawo enhle yokuhlikihla iNuru e-NYC? E-Nuru Studio, uzohlangana nabesifazane ababukisayo abangahlelela wena isikimu esiyingqayizivele sokubhucungwa. Ama-masseuse akulungele ukushintshanisa nokwenza ngezifiso ukubhucungwa okuvamile kwezocansi ukuze ugcwalise unyaka wakho. Ngokushesha nje lapho iseshini sesiphelile, uzocabanga ukuthi ucindezele kuphi kokulandelayo kwikhalenda lakho. Abelaphi bethu be-Nuru slide massage abenza konke okusemandleni abo ukwenza i-massage ezokuvusa izinzwa zakho futhi ivuselele umzimba wakho nomoya wakho. Ukuthinta okunomusa, umoya ophumuzayo, nezinto ezimbili esithelweni senyama ukwenza isenzo se-epidermic. Akukho ukuzivocavoca okufana nalezo ozothola kuzo IStudiyo seNuru.
Umzimba rub vs Nuru Massage
I-Nuru, i-tantra, i-body rub, i-massage evusa inkanuko e-NYC Julia 4 UKUBUYEKEZA Sawubona! NginguJulia, futhi ngilungele ukukwenza uzizwe ujabule ngokuphelele ngeseshini yokubhucungwa kwe-nuru nami. Ukwenza i-massage kungenye yezinto engizithandayo, futhi ngithuthukisa amakhono ami obuchwepheshe nsuku zonke. Ngiyakuthanda ukuhlangana nabantu abasha, futhi ngazi kahle ukuthi ngingubani nokuthi ngingazanelisa kanjani zonke izifiso zakho eziyimfihlo. Ngabe ufuna ukuthatha uhambo oluyingqayizivele nami futhi ube umngane wami amahora ambalwa? Ngiyaqinisekisa ukuthi uzohlabeka umxhwele ngeseshini nami. Bhuka manje! Ngeke ngikwazi ukulinda ukukubona. Shayela manje Buka Zonke Izithombe u-Alice 4 UKUBUYEKEZWA Ngabe ufuna ukuzama okuthile okungajwayelekile futhi uphumule amahora athile? Ngemuva kwalokho ngilapha nje kungenxa yakho. NginguJulia, futhi bengilokhu ngenza i-tantra massage eNew York City iminyaka. Angizanga kule ndawo esikhathini esedlule kakhulu, futhi manje sengikulungele ukuzwana nabantu abasha, ikakhulukazi nabantu abahlakaniphile nabaqinile, njengawe. Angiyena umasseuse onekhono lokwazi ukwenza i-nuru massage kepha futhi ngiwumdansi okhokhelwayo onolwazi lwesipiliyoni. Ngakho-ke, angingabazi ukuthi nakanjani uzogcwaliseka ngemuva kweseshini nami! Shayela manje Buka zonke izithombe uLucy 4 UKUBUYEKEZWA Ingabe ufuna ukuchitha amahora athile nentombazane enhle efike eNew York City ivela ezweni elincane laseYurophu? Ngemuva kwalokho sengikulungele ukukwenzela i-tantra massage. NginguLucy, futhi ngafika kuleli dolobha elikhulu ngivela eMoldova kungekudala, futhi manje ngifuna ulwazi olusha e-NYC. Ngikulungele ukukunikeza ngamasu e-massage ahlukahlukene kufaka phakathi i-massage evusa inkanuko. Ngizama ukuba nekhono nsuku zonke. Ukwenza weneliseke ngokwengeziwe, ngingaba nenkulumo encane nawe ngesikhathi sethu uma ufuna. Shayela manje Buka Zonke Izithombe Sasha 4 UKUBUYEKEZWA Ingabe ucabanga ukuthi ungachitha amahora ambalwa namhlanje kusihlwa? Ngakho-ke, ungaya esimisweni se-nuru massage eManhattan nami. NginguSasha, futhi ngiyazi ukuthi ngingawanelisa kanjani wonke amaphupho akho. Ngiyakuthanda ukuzijabulisa nabesilisa abahle futhi abanolwazi. Kungakho ngikuqinisekisa ukuthi ngesikhathi senqubo uzokhululeka ngokuphelele. Futhi ngazi izindlela eziningi zokubhucunga umzimba. Kungakho nami, uzoba nesikhathi esimnandi kakhulu sokubhucungwa ongasoze wasikhohlwa. Ufuna ukusondela kimi? Ngilinde wena! Shayela manje Buka Zonke Izithombe i-Valerie 4 UKUBUYEKEZWA Okuhle, okuhlakaniphile nokunekhono. Futhi kumayelana nobuntu bami. Ngingu-Valerie. Ngineminyaka engama-25, futhi sengivele nginolwazi oluningi kuzo zonke izinhlobo zokubhucungwa. Izandla zami ezithambile zazi kahle ukuthi ungenza kanjani i-nuru massage nokugcoba umzimba. Uma ufuna ukuzama okuthile okungajwayelekile, ngizojabula ukukubona. Ingabe uzizwa ukhathele futhi unesizungu? Ngakho-ke, ngizobe ngilungele ukuba nengxoxo nawe. Noma singangena esikhaleni sokusondelana amahora athile. Uma useManhattan manje noma uzofika eNew Your kungekudala, ngilinde ukuvakasha kwakho. Shayela manje Buka zonke izithombe u-Alina 0 IZIBUYEKEZO ngilapha ukuzokusiza uqede ukucindezeleka, udedele ukungezwani, futhi uphile iphupho elincane nami !! Nginolwazi olunzulu kakhulu, ngibuyekeza kakhulu, ngivule ingqondo futhi ngibe nentombazane eshisayo! Uyazi ukuthi kuyini ukwaneliseka kwangempela? Ngicabanga ukuthi yebo, ukube ubungivakashele ngaphambili! Uma kungenjalo-nje ngithumelele umqhafazo, bese wenza i-aphoyintimenti! Futhi uma usacabanga ngeseshini yokubhucungwa umzimba, ungacabangi- mane ungithumele umyalezo! Uma ufuna ukuzijabulisa kancane namhlanje, uma unesimo esingesihle, uma unezinkinga ezithile- - HLALA UZITHOBILE WANGIBHEKELE! Shayela manje Buka Zonke Izithombe Zarana 0 IZIBUYEKEZO Ubuhle obungaphandle kweZarana. Ngilapha ukuzokusiza uqede ukucindezeleka, udedele ukungezwani, futhi uphile iphupho elincane nami !! Nginolwazi olunzulu, ngibuyekezwa kakhulu, nginentombazane evulekile futhi eshisayo kakhulu! Uyazi ukuthi kuyini ukwaneliseka kwangempela? Ngicabanga ukuthi yebo, ukube ubungivakashele ngaphambili! Uma kungenjalo - mane ungithumelele umqhafazo, bese ubhuka isikhathi sami sesitayela seNuru Massage New York! Futhi uma usacabanga ngeseshini yokubhucungwa umzimba, ungacabangi- mane ungithumele umyalezo! Uma ufuna ukuzijabulisa kancane namhlanje, uma unesimo esingesihle, uma unezinkinga ezithile- - HLALA UZITHOBILE WANGIBHEKELE! Shayela manje Buka Zonke Izithombe Dana 0 IZIBUYEKEZO Ngivumele ngigxilise ingqondo nomzimba wakho ngokuzwa ukuqhuma kwami ​​komgogodla okuqinile kodwa okuthomalalisayo. Indlela yami yokwelapha, yokuqeda ukucindezeleka izoshukumisa izinzwa zakho. Ngizokhulula imisipha yakho, futhi, ngikhiphe wonke ama-kinks akho futhi ngisuse ingqondo nomzimba wakho izinkathazo nengcindezi yempilo yansuku zonke.
Bangobani Abahlinzeki Bokusikhipha Tantra
Abahlinzeki be-massage be-Tantra e-ejensi yethu bamane bangcono kakhulu ngoba ababanikezeli abaqeqeshiwe abanele be-Tantra massage ku-RubPage. I-Tantra massage yehluke kakhulu ukuthi ukubhucungwa okuvusa inkanuko, futhi amantombazane ambalwa kuphela aqeqeshelwe lokhu ngokuphelele. KwaMassage RubPage, sisebenzelana nochwepheshe abaqeqeshwe kakhulu abangaphelele futhi abahlala befuna ukujabulisa amaklayenti abo. Ngakho-ke, uma ufuna ukubhucungwa kweTantric, woza kithi uzobaqasha manje. Amadoda amaningi afuna ukuqasha kithi, yingakho kufanele usheshe. Siyakuqinisekisa ukuthi amantombazane ethu azokunakekela izidingo zakho futhi azokujabulisa kakhulu. Khetha i-Masseuse yakho (Ama-Masseuse amaningi ayatholakala. Xhumana nathi ngokutholakala kwanamuhla) UMelissa Noelle Sandrine Sofi Akekho noyedwa kubasisi bethu abangaqeqeshiwe noma abayizimfundamakhwela futhi yingakho sidume kangaka. Vele uqiniseke ukuthi uyathintana nathi futhi ngaphandle kwesikhashana, uzobe unamasundas wethu. Unenkululeko yokuqasha ama-masseuse amaningi kithi. Ngaphandle kokunikela ngamasseuse asezingeni eliphakeme, siyaqinisekisa ukuthi amaklayenti ethu awakhokhi kakhulu ngezinsizakalo. Ngakho-ke sigcine amanani ethu enengqondo impela. Uma unentshisekelo kuzinjabulo ezivusa inkanuko, mane uze kithi futhi ujabulele isikhathi esihle nama-masseuse ama-sexy. Sinikeza Ukubhucungwa Kwezocansi Njengoba igama liphakamisa ukuthi kumayelana nokuthola ukusikhipha okuvusa inkanuko ngenkathi ujabulela nezinzuzo zezempilo. Lolu hlobo lokumasaja ukuphela kwento enganelisa ngokuphelele. Hlola i-Happy Ending Massage Uma ufuna ukwaneliseka okuphelele bese ukubhucungwa kokuqeda injabulo kuyinto ekufanele. Woza kithi uzwe okuhle kakhulu ngaphandle kokukhathazeka. Hlola i-Tantra Massage Lungela ukuzwa ukusikhipha okumangalisa kakhulu empilweni yakho nge-tantra massage. I-Tantra massage ngeke nje ikujabulise kepha izokwenza uzizwe ulahlekile futhi. Hlola Ukubhucungwa Kwabashadikazi Lapho sikhuluma ngezinto ezivusa inkanuko bese ukubhucungwa kwemibhangqwana ukuphela kwento okufanele ukhethe uma ufuna ukujabulela injabulo nomlingani wakho. Hlola i-Asian Massage Asian massage imane nje iyona engcono kakhulu futhi uma uqasha ama-masseuse ase-Asia ale massage ngakho-ke ungajabulela umzuzwana ngamunye walesi seshini. Hlola i-NURU Massage I-NURU Massage imayelana nejel eshelelayo nabasizi abanamasondo abazimisele ukukunikeza umuzwa omuhle kakhulu wokuhlikihla empilweni yakho. Hlola Incwadi Nathi Manje Xhumana Nathi Uma ungumuntu, shiya le nkambu ingenalutho. Igama imeyili Ucingo Preffered Model -Khetha-SandySayuaStephanieSunjungDaryaFoxyKateLalaEvaKseniaLiliannaMarikaIrinLolaMarkizaMaryanLesyaMartaNinaRosierMelissaNoelleSandrineSofi Alternative Model -Khetha-SofiSandrineNoelleMelissaRosierNinaMartaLesyaMaryanMarkizaLolaIrinMarikaLiliannaKseniaEvaLalaKateFoxyDaryaSunjungStephanieSayuaSandy City Orlando Umlayezo Hambisa
I-Tantra Experience & Tantra Massage I-TANTRA EXPERIENCE NE-TANTRIC MASSAGE imizuzu engama-90 kuya emahoreni ama-3.5 Isipiliyoni se-Tantric siyisingeniso esihle ku-Tantra, lapho uzofunda khona ukungena kwi-Sacred Heart Space futhi uhlale lapho isikhathi sokuxhumana kwethu okungokomzimba. Ngesikhathi sawo uzothola imikhuba namasiko ahlukahlukene e-Tantric azokujabulisa ngokuphelele njengoba ekuholela ezikhaleni ezigxile kakhulu, ezijabulisayo, ezigxile enhliziyweni, ezinokuthinta umzimba nomphefumulo wakho. Okuhlangenwe nakho kwe-Tantric "kungahleleka" noma kungaba isipiliyoni "sokugeleza ngomzuzu" nokuthi kuhamba yiphi indlela kuzoncika enhlanganisweni yezifiso zakho nasekuhambeni kwamandla ethu okwamanje. Kungenzeka kanjani ukuthi ibe ngenye indlela, uma bekungaba isipiliyoni sangempela seTantric? Kodwa-ke, kunezimo ezimbili ezingaba khona futhi uma sikhuluma ngaphambi kokuba sihlangane sixoxa ngokuthi yikuphi okungakusiza kakhulu. Isimo esihleliwe Isimo esakhiwe singahle sifake izinto ezinjengokukhuluma ngokusondelana ukuze sazane, isipiliyoni sokugeza kwe-Tantric, ukungena kwi-Sacred Heart Space nokwenza uxhumano lomphefumulo bese sisuka lapho siye enkanukweni (ngenkathi sibambe leso sikhala esingcwele siphelele ) ngokuhlangenwe nakho kokuthinta inkanuko, ngiqale nawe bese kuba nawe. Lokhu kungalandelwa umuzwa ongcwele wokuthakazelisa inkanuko, lapho ugoqwe khona ngamehlo, ungeniswe ekuzileni kweTantric, nazo zonke izinzwa zakho zivuselelwe ngamandla njengezihola kwi-Sensual Tantric Massage. Ngeminye imininingwane, sicela ufunde indatshana yami enamathiselwe ku-Sacred Sensual Delight Experience. Imvamisa ubude balezi zikhathi buphakathi kwehora nesigamu no-3.5 ihora leseshini, isikhathi eside isikhathi esiningi senjabulo eyengeziwe. Eqinisweni, ungahlanganisa isimo esihleliwe nesingahlelwanga ngokunweba ubude besikhathi seseshini. Isimo esingahlelekile Isimo esingahlelekile sizoqala ngokufana neseshini ehleliwe ngengxoxo lapho ngizozama khona ukuthola indawo yesidingo, isifiso noma isifiso kuwe ukuze ngikwazi ukusizakala kulokho esimisweni. Sizongena esikhaleni seTantric omunye nomunye okuyindawo yobukhona obunamandla, obuxhumene nenhliziyo. Ngemuva kokuthi sisungule ukuxhumana kwethu okujulile, okuzokwenzeka kuzoba nokuningi okuphathelene nalokho okuvelayo engxoxweni yethu yokuqala. Imvamisa, ngingakufundisa ukuthi ungathinta kanjani i-Tantrically futhi ndikuqondise ukuthi uwalandele kanjani amandla sowesifazane bese sakha ukugeleza kokulandela, ukuhola, nokuhlanganisa amandla. I-Tantric Massage - Ihora elilodwa I-Tantric Massage akuyona i-massage ejwayelekile. Kufaka phakathi wena ukufunda ukuthi wehlise ijubane ngokufunda okulandelayo: Ukuphefumula kweTantric Ukuxhuma ubulili bakho, inhliziyo nomoya Isikali sokuvuka esenza ukuba wehlise ijubane. Okufanele ukwenze esicongweni senjabulo yakho ukuze usabalalise amandla akho okuphila omzimba ocansini kuwo wonke umzimba wakho, wandise amathuba okuthi ube nokuhlangenwe nakho okugcwele komzimba. Konke lokhu kungezelelwa kokuthanjiswa okuthokozisayo, okuthinta inkanuko okubuyisa futhi kukuvuselele. I-Tantra Experience ne-Tantric Massage - Ihora elilodwa nohhafu I-Tantra Experience ne-Tantric Massage combo izokunikeza isingeniso sangempela ku-Tantra. Lapho i-Tantric Massage ihlanganiswa ne-Tantra Experience inamandla amakhulu ngokwedlulele ngaphambi kwayo. Lapho ufika, ngikushintshela isarong engikondla ngayo. Sikhuluma isikhashana ukuxhuma amandla ethu futhi sibe ngabantu bangempela komunye nomunye. Ngemuva kwalokho sithuthela kwi-Sacred Heart Space, okuyindawo yobukhona obunamandla obuxhumeke inhliziyo, futhi senza ukuxhumana komphefumulo. Lapho-ke sesibambe leso sikhala siphelele, sisuka lapho siye kokuvusa inkanuko ngokusebenzisa isipiliyoni sokuthinta inkanuko, ngiqale ngibe nawe bese kuba nami. Ukusuka lapho singena esikililini senyama yeTantric. Kuzoba okucebile kakhulu futhi okude kakhulu, ihora kanye nohhafu ozoba nakho ngesikhathi sakho sempilo - futhi ngingasho okuningi ngehora leTantric Massage. I-Tantra Experience ne-Tantric Massage - amahora ama-2 Manje, ake ngingeze okwenzekayo kulokho okwenzeka emahoreni amabili. Siya kolunye lwezinkomba ezimbili, ukukhetha kwakho. Inketho 1. Okuhlangenwe nakho Okungcwele Okujabulisayo Kwenyama. Ngaphambi kokukunikeza imasaji, ngikubopha amehlo bese ngikukhombisa isimo sokuthula, esigxile ebukhoneni beTantric. Ngemuva kwalokho ngifaka izinzwa zakho zibe mnandi ngezindlela eziningi ezivusa inkanuko nezingavusa inkanuko - umuzwa wakho wokuhogela, ukunambitha, ukuzwa, ukuzwa kinesthetic / ukuzwa. Inketho 2. I-Tantric Touch ekhangayo ngikufundise ukuthi ungathinta kanjani izinkanuko usendaweni enamandla, exhumeke enhliziyweni. Manje ngizokufundisa ukuthi uzizwe kanjani amandla ezandleni zakho nokuthi ungathinta kanjani ngezindlela eziletha umzimba wonke wowesifazane uphile. Uzofunda nokuthi ungathinta kanjani ngendlela ethathayo. Uma uthinta ngendlela ethile, uzinika injabulo ngokuthinta kwakho. Uzofunda ukuthi ungakwenza kanjani lokho ngendlela eyandisa injabulo yomlingani wakho. I-Tantra Experience ne-Tantra Massage - amahora ama-2.5 Uma ufuna kokubili iSacred Sensual Delight Experience futhi ufunde futhi wenze iTantalizing Tantric Touch, khona-ke unesikhathi samahora angu-2.5. Ungakhetha futhi iseshini yamahora angu-2.5, uma ufuna ukuchitha isikhathi esandisiwe ekuthuthukiseni amandla akho wokujabulisa owesifazane ngokumvusa ngokuthinta kwakho nokuba khona kwakho okusuka enhliziyweni. Kungenzeka wenze amahora amaningana ku-Tantric Touch nokuthokozisa uNdlunkulukazi. Uma isikhathi esiningi lapho sizofunda ngokwengeziwe futhi neseshini izosondelana ngokwengeziwe. Kukhona njalo iTantra Mastery Session on Pleasuring the Goddess, uma ufuna ukungena ujule kulo mbuso. I-Tantra Experience ne-Tantric Massage - amahora amathathu kuya phezulu Uma ufuna zombili izinketho 3 no-1 kepha ufuna ukungena ujule kunketho 2 lapho-ke uzobe wenza iseshini yamahora amathathu noma amathathu.
Ukubala kwezwi: 1433
I-Happy Ending Massage BDSM BODY RUB
Ukuthanjiswa okuvusa inkanuko - nina nobabili nisebenza ngocansi anqunu futhi baphulula umzimba wakho wonke kufaka nezitho zakho zangasese ngezandla zabo Hlikihla umzimba - lokhu kufana nokuhlikihla inkanuko Isilayidi somzimba - imvamisa kuyingxenye yenkonzo yokuhlikihla inkanuko. Lapho iklayenti linqunu, libheke phansi, umsebenzi wezocansi uzolala umzimba wakhe onqunu emzimbeni weklayenti. Kungafaka futhi iklayenti elivalwe amehlo ngenjabulo eyengeziwe yezinzwa. Kungabandakanya nomsebenzi wesandla, iFulentshi kanye noma insizakalo ephelele Inganekwane - ingabandakanya umqwayizi ogqoka imvunulo ethile noma iyunifomu (isb. Umhlengikazi / intombazane yesikole / ukukhathala kwamasosha / izembatho zezemidlalo) kanye / noma nendima yokulingisa - ukudlala indima ngesikhathi esimnandi lapho iklayenti nomsebenzi wezocansi bevumelana ngesimo esithile futhi badlale indima ethile okusho ukuthi. iklayenti lingumphathi omkhulu kanti umqwayizi uyingane yesikole egangile futhi uyashaywa lapho ethola izimpendulo zingalungile ekilasini B / D noma eBondage naseDiscipline - kufaka phakathi ukubhaxabulwa, ukushaywa, ukushaywa, ukukhishwa, ukuboshwa, ukutshelwa okufanele akwenze uma evalelwe njll. Abathengisi abaningi bezocansi abaqeqeshiwe abahlinzeka ngalezi zinsizakalo baziwa ngokuthi yi-Professional Mistresses noma iMasters. Kukhona futhi ama-brothels akhethekile asethelwe lolu hlobo lwezinsizakalo ngayo yonke imishini eyingqayizivele edingekayo okusho ukuthi. izindophi, iziswebhu, ukuvaleka ngamehlo, ukuboshwa (ozankosi), izinduku, izitshalo, ama-suspension racks, ama-A ozimele njll. Lezi zinsizakalo kwesinye isikhathi ziyizimo zocansi futhi kwesinye isikhathi azikho i-S / M noma iSadism neMasochism - uhlobo olweqisa kakhulu lwe-B / D . Kungafaka ukubhoboza okukha phezulu, ukusika, ukukhubazeka okukhulu kwezinzwa, ukuthotshiswa, izimo zezokwelapha njll. Abathengisi bezocansi abaqeqeshiwe abaningi abahlinzeka lezi zinsizakalo baziwa njengeProfessional Mistresses noma iMasters. Kunama-brothels akhethekile asethelwe lezi zinhlobo zemisebenzi ngayo yonke imishini eyingqayizivele edingekayo okusho ukuthi izindophi, iziswebhu, izinduku, izitshalo, ama-suspension racks, ama-A-ozimele, imishini yezokwelapha, imishini yokubhoboza, njll. Lezi zinsizakalo kwesinye isikhathi zinobulili futhi kwesinye isikhathi akunjalo. Qaphela: I-BDSM ivame ukusetshenziswa ngokungaguquguquki ukuchaza isigcawu se-B / D ne-S / M sisonke. Abafazi abahle, abakhulumayo, baseMelika abahlinzeka nge-Titillating Erotic Body Rub Experience Relaxation, Roleplay & BDSM Ngaso sonke isikhathi uzilungiselele futhi ugqoke ngendlela engenacala, siyakuthokozisa ngezingxoxo zethu namakhono okukhohlisa. Sizokuletha emadolweni akho futhi sisebenzise umlingo wethu kuwe. Ukwanelisa inkanuko yethu, isipiliyoni se-tantric, ubuhlakani, nokuthandeka kwethu kungezinye zezimpahla zethu ezinkulu kakhulu - kepha yikhono lethu lokukunikeza injabulo ephephile engenakulinganiswa enamadoda abuyela kokunye.
Ungayibhuka kanjani i-Naked Massage?
Izikhathi zomzimba ne-Sue Noma ngubani ongakafiki emhlanganweni nomfundisi wezocansi othile, umqeqeshi wezobudlelwano noma osebenza ngomzimba kungaba nzima ukucabanga ukuthi kuzoba njani. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukusebenza komzimba akumele kusho ukuthinta umzimba. I-Sue ekhombisa iklayenti lapho i-shaft ye-clitoral isesithambekeni sangasese esifanele se-anatomically Lezi zithombe ze-Sue ezimweni ezahlukahlukene zizokunikeza umbono wokuthi iseshini ingabukeka kanjani. Wonke amaklayenti ahlukile. Abanye balangazelela ukuthintwa, abanye bangakwesaba ngakho-ke, sonke isikhathi sihlukile. Izikhathi zivame ukufaka inani elinempilo lokukhuluma, ukufakaza, ukubonisa kanye nokunambitha. Ezinye izikhathi azibandakanyi nhlobo ukuthinta umzimba. Izikhathi zemfundo yezocansi zingagqokiswa, kusetshenziswe amakhushini wesitho sangasese alungile ngokomzimba namaqhude athambile. Ukuthinta okuqondiswe kwiklayenti. U-Sue ubambe amaklayenti ngesandla kanti esinye isandla sokuthwebula izitho zangasese I-Bodywork Bodywork sessions ingagqokiswa ngokuphelele, igqokiswe kancane noma inqunu. Ngaphezu kwalokho, amaklayenti amukelekile ukuthi agqoke noma akhumule izingubo phakathi neseshini. Ingxenye ebaluleke kakhulu yokusebenza komzimba ukuthi iholelwa ngamakhasimende. Konke ukuthinta kufanele kucelwe yikhasimende. Ngokuthinta izitho zangasese nezangasese uSue uzohlala egqoka amagilavu. Iklayenti linquma ukuthi amagilavu ​​agqokiwe yini olunye uhlobo lokuthinta.
Qala u-2019 ngokuziphatha komzimba omnandi. Joyina uBo, umholi onamava nonesiphiwo somsebenzi womzimba, nabanye abathandi bomzimba ovusa inkanuko njengoba benikeza, bethola, futhi bezwa ukuphumula, inkanuko, inkanuko, ubuzalwane, kanye nezimo eziguquliwe ngomlingo womzimba. Lesi seshini sizoba ngoMgqibelo, Januwari 5 th, 2019 kusuka ngo-5 ntambama - 8:00 pm eTodd Pilates & Barre Studio North.
Eminyakeni yokusebenza kuyo yomibili i-Hatha yendabuko ne-Vinyasa yoga, i-Yoga Therapy, i-Neo-Tantra, ukusebenza komzimba okuvusa inkanuko nokuziphatha, ukufundisa ngocansi nokuqeqeshwa ngocansi, sengisungule ifilosofi ezungeze ingcindezi engokomzwelo ebangelwe ukwethula isithombe sethu esingaphelele umhlaba. Lesi sithombe sivame ukufihla imvelo yethu yezocansi neyezomoya ngaphansi kwezimaski zenhlalo, icala nehlazo, ngaleyo ndlela sinciphise amandla ethu okuthola INKULULEKO, INKULULEKO kanye NOTHANDO OLUNGAPHELELI. I-Yoga Therapy isiphuca la maski ngenhloso yokuphulukisa ingqondo yethu , umzimba, inhliziyo nomphefumulo. Ukwelashwa kwe-Yoga Unqunu kukuvumela ukuthi ubonwe futhi ufakazelwe ngaphandle kokwahlulelwa, inkululeko yokuba yinoma ngubani okuyo nganoma yisiphi isikhathi esithile, wamukelwa njengoba unjalo futhi wakhuthazwa ukuba wenze izinguquko ezinengqondo nezinomthelela ukuvumela inkululeko ethe xaxa, ukuzithanda, inkanuko nobubanzi ku impilo.
I-Urban epholile ngesimo Sokusheshisa okuphendula kahle kude namalambu i-Aerox Naked inikwa amandla yinjini evuselelekile epholisa uketshezi engu-50cc 2-stroke. I-aerodynamic R-series bodywork ephefumulelwe iyinto yokubamba yangempela. Futhi nge-chassis engasindi, amasondo ayi-intshi angu-13 intshi, amabhuleki e-disc angu-190mm nokumiswa kwezinyathelo ezibushelelezi, yakhelwe isenzo esibucayi. I-Aerox Inqunu: ukuzijabulisa okumsulwa nenkululeko.
Ngenze izindlela eziningi zokwelapha ezehlukene empilweni yami futhi ngiyisiqu somzimba esizibiza ngomuntu. Uyazi ukuthi abantu bathini "Yini obungayenza uma imali ingekho inkinga?" Impendulo yami bekulokhu: into efanayo naleyo engiyenzayo manje kepha benginabagcini bezindlu amahlandla amaningi ngesonto, bengindiza ikilasi lokuqala, futhi ngithole ukusebenza komzimba masonto onke, hhayi nyanga zonke. Akuxoxiswana ngami.
Ngakho-ke, i-transverse V12 engines chassis, engenakho ngokuphelele ukusebenza komzimba, ikhonjiswe embukisweni wezimoto we-1965 eTurin, lapho abathengi abanentshisekelo befaka khona ama-oda ngisho nangaphambi kokuba umzimba omangalisayo udwetshwe. Imoto eqediwe yagcina ikhonjisiwe embukisweni wezimoto waseGeneva wango-1966, lapho abagembuli ababecabanga ukuthi ubuhle bukaMiura babengeke babe ngaphezu kwesikhumba nje kungenzeka babethanda.
Abahlinzeki Bemizimba Abakhulu Base-UK eLondon
BUYEKEZA IMifula YaseLondon Incwadi 1: Umsebenzi Womzimba Uchungechunge oludayiswa kakhulu lwezinganekwane ezifikisayo luza kumahlaya, nombhali uBen Aaronovitch ehlangana nomlobi osebenza naye u-Andrew Cartmel nomculi uLee Sullivan Rivers waseLondon, uchungechunge oludayiswa kakhulu kakhulu lwezinganekwane ezimnandi eza kumaTitan Comics. Ngenkathi umbhali uBen Aaronovitch ebeka ukuthintwa kokugcina kwinoveli elandelayo ochungechungeni, i-The Hanging Tree, uhlanganyele nomlobi osebenza naye u-Andrew Cartmel (owayekade engumhleli wesikripthi sika-Aaronovitch kuSylvester McCoy's Dr Who in the 80s) kumahlaya ambalwa amaqoqo okuvala igebe. Okokuqala umsebenzi womzimba. I-protagonist yethu nguPeter Grant (cabanga ngoLuther ekuqaleni komsebenzi wakhe), osebenzela uphiko lwemilingo lweMet Police. Ungumbalisi wethu kumanoveli, amehlo nezindlebe zethu. Njengoba efunda ukuthi iMet yaqala kanjani ukuhlukaniswa ngomlingo nokuthi kungani, nathi sinjalo. Futhi njengoba uGrant enza umsebenzi wakhe wamaphoyisa uthola ukusetshenziswa okuningi kwemilingo yakhe. Umthamo wamahlaya, yiqiniso, ubonakala kakhulu kune-prose, okusho ukuthi kunesidingo esincane sezincazelo ezinemininingwane. Noma kunjalo, okukhona kuthumba izwi likaPeter Grant kahle. Kepha lapho amahlaya alahlekelwa ngamagama abawazuza ezithombeni, ngobuciko obucacile obuhle obuvela kuLee Sullivan. Ngezikhathi ezithile kuncane ohlangothini oluncane, ngeshwa olushiya umthengisi wezinkanyezi uLuis Guerrero egcwalisa imininingwane eyengeziwe, futhi lapha kunokuthambekela kokuthola okusindayo ngezikhathi ezithile. Inkinga enkulu uSullivan anayo, yiqiniso, okwenza uPeter Grant nabalingisi babe ngabantu bangempela. Ngemuva kokudala izithombe ezingqondweni zethu, kuzohlala kunokungafani lapho lezi zinhlamvu zivela kokubonwayo. Abafundi bezincwadi bazoba nemibono yabo yokuthi abalingiswa kufanele babukeke futhi bagqoke kanjani, kanti uSullivan kufanele aphathe lokhu okulindelwe. Umlingiswa kaBeverly Brook, isibonelo, uchitha isikhathi esilinganayo kumanoveli asemanzini futhi, awunqunu, kepha unikezwa i-wetsuit ecatshangelwayo yamahlaya! Kubafundi abalwazi lolu chungechunge, indaba yangempela - uphenyo ngezimoto ezihanjisiwe - empeleni ilula kunenoveli, kepha abalandeli ngeke neze badumale. Kubafundi abasha, noma kunjalo, lokhu akukhona ukweqa okungcono kakhulu kwephuzu. Funa inoveli yasekuqaleni yemifula yaseLondon, bese uyabuya - uzozibonga! Ekugcineni kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ngenkathi kunomugqa webhonasi onamakhasi amahlanu omnandi okhethekile kumagazini oqoqiwe, izinto eziningi zeprozi zangemuva ezivela kumahlaya okuqala ngokudabukisayo azikho. Okuhlobene
I-Bakers Body Shop eLondon, KY, inikela ngokulungiswa okuphelele komzimba okubandakanya ukusebenza komzimba osezingeni eliphakeme, ukudweba, ukulungisa ukushayisana, nokwakha kabusha okuzenzakalelayo. Ngokuhlangenwe nakho okuhlanganisiwe kweminyaka engaphezu kwengu-100, sigxile KONKE ukulungiswa kokushayisana kwezimoto futhi sisebenza nazo ZONKE izinkampani zomshuwalense. IBakers Body Shop inedumela eliqinile namakhasimende amaningi anelisekile eLaurel nasezifundeni ezizungezile. Sicela ubheke ikhasi lethu Mayelana Nathi ukuthola uhlu oluthile lwamakhasimende. Siyabonga ngokuvakashela isayithi lethu.
Manje, amahlaya aseBrithani, sengibuyile. AmaTitan Comics angitholile manje. UBen Aaronovitch ubhale owokuqala ochungechungeni lwamahlaya angaphakathi olubizwa ngeRivers of London, oluyingxenye yezindaba zakhe zikaPeter Grant ngalelo gatsha lamaphoyisa aseMetropolitan asebenza ngomlingo. Kuyinto yaseBrithani, ingamahlaya afanele aseLondon futhi iyamangalisa. Kungenzeka kanjani ukuthi noma iyiphi indaba yehluleke ukungena lapho abalingiswa bokuqala abane (abaphilayo) bengunkulunkulukazi womfula ogqoke i-wetsuit ebubende; U-DC Guleed e-hijab, umphathi wakhe u-DI Stephanopoulos, ongungqingili onobungqingili ogqoke ijazi elibukeka kahle; kanye nesahluko ebesikade sisilindile, DC Peter Grant (egqoke isudi emnyama esobala). Uyiphoyisa elincane leFolly, uphiko olwenza izinto 'ezixakile' zoMbutho, okusho ukuthi wenza imilingo. IMifula yaseLondon ibhalwe ngokubambisana ngu-Andrew Cartmel, edwetshwe kahle nguLee Sullivan, yaqedwa nguLuis Guerrero noRona Simpson. Ukuze usheshe usheshe udaba, funda ukubuyekeza kwami ​​kwezincwadi ezinhlanu zokuqala zochungechunge luka-Aaronovitch lukaPeter Grant lapha, bese ubuya lapho usukulungele.
Uhlu Lokumasaja Lwezocansi
I-massage evusa inkanuko ingasetshenziswa ekwelashweni kwezocansi njengendlela yokuvuselela i-libido noma ukukhulisa ikhono lomuntu lokuphendula kahle ekuvuseleleni inkanuko. Umlayezo ovela kuJoseph Kramer, Ph.D. Kwezinye izingozi, ukubhucungwa inkanuko kungaba yindlela yokudlala ngaphandle kokukhishwa ngokobulili, okuhloselwe ukukhulisa ukuzwela kokucacile ngaphambi kokunye ukuzibandakanya lapho kuhloswe ukuvusa nokufeza ngokocansi. Ukubhucungwa komzimba kusetshenziselwe inkulumo yezokwelapha isikhathi eside kakhulu, futhi ukuba lusizo kwazo ngezinjongo zokuvusa inkanuko nakho kunomlando omude. Bheka i-OrgasmicYoga.com. Isikhulu samaphoyisa silungise lesi sigameko senziwa eCrown Spa, okuyisikhungo sokubhucungwa umzimba se-amatory. Iphunga elikhilimu le-vanilla lenza ukuhlasela okukhulu okunephunga nokumnandi. 24 isigameko. Ama-Incels - noma ama-celibates angazibandakanyi - aziwa ukuthi akhuthaza umbono ongaqondile, imvamisa ngokusebenzisa amabhodi okufaka online Ukubhucungwa umzimba kwenzeka lapho uzivocavoca nomlingani wakho. Uhlonishwe njengofileyo endaweni yesigameko. Kuthatha izinhlobo eziningi, kusuka kumasu wokuhlikihla ahlose ukuhlanganisa ezocansi, ezingokomoya nezingokomzimba, ukubhucunga izinhloso zazo ukufezekisa i-orgasm ngokusebenzisa i-handjob massage, ucansi lomlomo, noma ucansi.
Izikhombisi ze-Bodyrub ze-Masualual Massage
Kodwa-ke, iningi labelaphi be-massage alisebenzi enqunu ngenxa yemikhawulo abanayo njengabahlengikazi abangochwepheshe bokuhlikihla. Kusho ukuthini ukubiza nokukhala? I-TouchByVenus.com yenza ukuthi amaklayenti avela ezifundeni ezihlukile abe nenye indlela yokwenza ukuthi i-masseuse ingene ekhaya labo, ebizwa ngokuthi yi-in-call. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kumassage enza i-tantric, izinkanuko nezocansi. Ngingabhukha kanjani i-erotic massage Therapist? Indlela enhle yokubheka i-erotic massage Therapist ukuyisekela kokuthandwayo kwakho nokuthandayo. Ukuhlangenwe nakho okuningi anakho ekunikezeni ukugcotshwa okufanele, kulapho izandla zakhe zinekhono ngokwengeziwe. 2. Ngemuva kokufunda ngamanani ama-masseuse, unganciphisa ukukhetha kwakho bese ukhetha ukuthi iyiphi ongayiqasha. Siyazibophezela ukuthi uzoba phambili maqondana nokungabaza kwakho uma ufuna ukuqinisekisa ukuthi i-imeyili yesithombe kuphrofayli yomasseuse inembile noma cha. 5. Asinakho ukuxhumana ne izindawo zokubhucungwa umzimba. Amadolobha aphezulu wokuhlikihla i-Atlanta Austin Baltimore Beverly Hills Boston Chicago Cleveland Dallas Denver Fort Lauderdale Honolulu Houston Jersey City Las Vegas Los Angeles Miami Miami Beach New York City Orlando Palm Springs Philadelphia Phoenix Portland San Diego San Francisco San Jose Santa Monica Seattle Studio City Tampa Washington, DC Ingabe uyiwebhusayithi yezinsizakalo zokuphelelisa? Cha. 7. Thola abelaphi be-stroking kanye nokubuyekezwa kokuvusa inkanuko nobulili emadolobheni ajwayelekile njengeNew York, Los Angeles, Miami naseSan Francisco. nurustudio.com yisikhombi semibhalo eshaywayo esezingeni eliphezulu, hhayi iwebhusayithi yokuphelezela. Mane upheqa umkhombandlela wethu, unqume ukuthi ushoda ngocingo noma ngaphandle kocingo. Imaphi amadolobha athandwa kakhulu eMelika? I-Erotic Massage eNew York mhlawumbe idolobha elidume kakhulu, eliya emadolobheni anjengeLos Angeles, iChicago, iSan Francisco, iSan Diego neWashington DC. Ngabe izithombe zamasseuse kuwebhusayithi yakho zinembile? rubpage.com inenqubomgomo yobumfihlo eqinile kakhulu. Isiqondisi sethu sokubhucungwa izinkanuko nezocansi akuwona 'umphambili' wezindawo zokuhlikihla umzimba noma zezifebe. Uma uzibuza ukuthi ngabe ukusikhipha inkanuko noma ukuvusa inkanuko kungaholela kokunye - siyakuqinisekisa ukuthi umkhangisi ngamunye ngabantu abangakutshela ngendlela abasebenza ngayo. Lapha, sibheka ilungelo lethu lika-masseuse lokwenza ubuhlakani ngomsebenzi wabo - ngakho-ke abanye babo bangakhetha ukufihla ubunikazi babo ngokuthumela umhlukanisi ohlukile kusayithi lethu. Izinhlobo zokuhlikihla zokwelapha, i-tantric, libidinous kanye ne-sexy ziyatholakala ngomkhombandlela wethu - noma ngabe sincoma ukuthi ubuze umuntu ngamunye ukuthi unolwazi olwanele yini lokunikeza uhlobo lwensizakalo yokushayisana obukhathazayo. Lapho usudlulise imininingwane ye-masseuse, ungambuza ngqo ukuthi angasebenza enqunu noma cha. 6. Okunye ongakwenza ukubhuka i-rubbing Therapist ngokuzwakalayo, lapho kuzoba nguyena ozoya endaweni yangakini. 3. Ngabe izikhathi zokuvusa inkanuko zingaphelelwa nqunu? Kungenzeka, ikakhulukazi esimweni sokugcotshwa komzimba, i-tantric kanye nezinkanuko zenyama. I-West Hollywood Mayelana ne-rubpage.com iTouchbyvenus.com iyisikhombi esikhulu kunazo zonke sokubhucungwa kwezocansi kanye nenkomba yokubhucungwa inkanuko. Siphakela ikakhulukazi ukwelashwa, i-Tantra, i-Massage ne-erotic. Futhi, inhloso yethu ukuhlanganisa iwebhusayithi ebanzi kunazo zonke yezingcweti zokuvusa imizwa nezocansi kwi-Intanethi - futhi akukho okunye okudlula lokho. Mane nje uhlole uhlolisise bese ukhetha inketho oyifunayo: -I-Massage Eyisikhuthazo -I-Massage Yesibili -I-Massage Eyi-Tantric -Imithi Yokwelapha Noma ngabe uhlala kuliphi idolobha, ukuqagela kokuqasha i-erotic massage Therapist kuthule. Lapha siphendula imibuzo ejwayelekile kakhulu
Ama-Masseuse okugcoba umzimba
Nciphisa ukucindezeleka ngokuhlangana kweklabhu yezempilo ephumuzayo futhi evuselelayo evela eGay Bodyrub yaseNew York. Nge-shampoo ezohlangana noma idlule eyakho engenakuphikwa, ungabhekeli ngaphezu kwale spa. Ukuqinisekisa ukutholakala kwabasebenzi bayo, le spa icela amaklayenti ayo ukuthi abhukhe ama-aphoyintimenti ngaphambi kwesikhathi. Ngamanani abizayo, ungazitotosa bese uthola inzuzo ephezulu ye-spa evela kuGay Bodyrub. Ukukhokha ngekhadi lesikweletu elikhulu kuyashelela futhi kulula kumakhasimende weGay Bodyrub. Indawo yokupaka igalaji iseduze, yize abashayeli bamukelekile ukufuna indawo emgwaqweni. Uma ungekho ngempelasonto, iGay Bodyrub iyindawo enhle ongaya kuyo futhi uphumule umzimba nengqondo yakho.
Kusuka Kubahleli Bethu Yehlisa isichasiso ngesipiliyoni sokuphumula nokuvuselela indawo yokuphumula evela eGay Bodyrub yaseNew York. Ukuze uthole ukubhucungwa komzimba okuzohlangabezana noma kudlule nezidingo zakho, ungabe usabheka ngale kwale spa. Ukuthola ukutholakala kwabasebenzi bayo, le spa icela amaklayenti ayo ukuthi abhukhe ama-aphoyintimenti ngaphambi kwesikhathi. Ngamanani abizayo, ungazitotosa futhi uthole inzuzo ephezulu ye-spa evela kuGay Bodyrub. Ukukhokha ngekhadi lesikweletu elikhulu kulula futhi kulula kumakhasimende weGay Bodyrub. Ukupaka igalaji kusethwe eduze, noma ngabe abashayeli bamukelekile ukucinga indawo emgwaqweni. Uma ungeke uphumule ngempelasonto, iGay Bodyrub iyindawo enhle ongaya kuyo ukuze uphumule futhi uphumule umzimba nengqondo yakho. Thola izikhombisi-ndlela
Okuvela Kubahleli Bethu Yehlisa ingcindezi ngesipiliyoni sokuxegisa nokuvuselela i-spa esivela eGay Bodyrub yaseNew York. Ukuze uthole massage ezokwazi ukuhlangabezana noma ngisho nokudlula izidingo zakho, ungabheki ngaphezu kwale spa. Ukuqinisekisa ukutholakala kwabasebenzi bayo, le spa icela amaklayenti ayo ukuthi abhukhe ama-aphoyintimenti ngaphambi kwesikhathi. Ngamanani abizayo, ungazithokozisa futhi uthole izinsizakalo ze-spa zokuphela okuhle ezivela kuGay Bodyrub. Ukukhokha ngekhadi elikhulu lokukholwa kulula futhi kulula kumakhasimende weGay Bodyrub. Ukupaka igalaji kutholakala eduze, yize abashayeli bamukelekile ukuzingela indawo emgwaqweni. Uma ungekho ngempelasonto, iGay Bodyrub yindawo enhle ongaya kuyo uphumule futhi uphumule umzimba nesibindi sakho.
Hlanganisa izintombi zakho bese uchitha isikhathi e-spa. Uma uzibuza ukuthi yiliphi iklabhu lezempilo okufanele uvakashele, ungabe usabheka kude kuneGay Bodyrub ethethisa kakhulu eNew York, NY. Lokhu kugcoba kwe-spa kungasiza ukunciphisa ukucindezeleka kwansuku zonke futhi kuthuthukise ukuma.
I-bodyrub eNew York Usesho lwakho seluphelile. Izwa ukubhucungwa okuhle kwe-amatory eMidtown East, Manhattan. Chaza ukuphumula kwakho. Yamukela izifiso zakho. Bhuka iseshini yesifungo sakho. Sisebenza kanzima ngoba kukufanele. Cabanga ngokuma kwethu okuhle ukukusiza ukuthi ufike endaweni yakho ejabulisayo. Sikwazi kahle okudingayo futhi asinamahloni okuletha. Woza uzozibonela! Iseshini ingenziwa ngokunganaki kuzo zonke izidingo zakho. Sihlanganisa ukugcotshwa kobuningi bezocansi, ukubhucungwa i-nuru, ukuzijabulisa kweshawa, ukuvivinya umzimba nge-fetish, nokuzilungisa okujwayelekile. Sithandana ngokusebenzisanayo nemibhangqwana! Letha umuntu wakho omthandayo ukuthi azame futhi ahlangane nokwazi kwakho okukodwa ngasese! Kuhle kakhulu ukubona ukuthi abantu bashintsha kanjani. Namuhla ungaba omunye umfokazi olahlekile eNew York ngokugcwala okugcwele izinkinga. Ngenyanga singabona amehlo akho akhanyayo bese sizwa izindaba zakho zempumelelo ezixegayo! Siyayazi imfihlo yenjabulo yangempela - yenza lokho okuthandayo futhi ujabule ngoba nje! Amakhasimende ethu avamile ake afana nawe .. abantu ongabazi abangabazayo. Basinike ithuba futhi manje singabangani abahlanganyela izimfihlo, baphakamisane futhi bashintshisane ngoketshezi lwezocansi nama-endorphin. Chofoza ukuze ubone igalari yabadlali bethu SINIKE UBIZO Ngingayibhuka kanjani i-amatory massage eNew York? Kulula kakhulu! Sishayele noma usithumele ingqikithi. Mhlawumbe sizokwazi ukukuhlalisa ngokushesha kunokuba ucabanga! Uyini umehluko phakathi kokubhucungwa kwe-NuRu ne Umzimba uhlikihla iNew York isitayela? Sinikeza izinhlobo eziningana zokwelashwa komzimba. Ukuhlikihlwa kukaNuru kwenziwa embhedeni womoya okhethekile onejeli efudumele yeNuru. Ngokuyinhloko ukubhucungwa komzimba, lapho umzimba uhlikihla umzimba uhlanganisa izinto zokwelapha zomzimba ngemivimbo evusa inkanuko, eyenziwe ngezandla. Usethwe kuphi? SiseMidtown East (Manhattan, New York). Kusemthethweni? Yebo! Sizibheka njengabajabulisi ngaphezu kwabahlinzeki bokuhlikihla kwezokwelapha. Uma ufuna ukwelashwa okwengeziwe, i-shampoo yezokwelapha ngosizi lwakho oluthile sincoma ukuthi uxhumane ne-chiropractor. Ngisilungiselela kanjani isikhathi? Ungacasuli. Uma uvakashela isitudiyo sethu sinakho konke okudingayo. Ungageza futhi ngaphambi nangemva kweseshini. I-Nuru massage idinga ukwesaba ukushawa ngoba kusetshenziswa ijeli ekhethekile yolwandle. I-EROTIC MASSAGE ENEW YORK. NGOKUQokwa